လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: November 2014
ရုပ်ပုံလွှာ ရိုက်ကူးခြင်း -(၅) ( Portrait Photography-5)
Sunday, November 30, 2014 Photography ပညာရပ်ဆိုင်ရာ
ကျွန်တော်သည် ရုပ်ပုံလွှာ ရိုက်ကူးခြင်း ( Portrait Photography ) နှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်စု အမှတ် (၁) မှ (၄) အထိ မှတ်စု လေးခု ရေးခဲ့ ပါသည်။ Portrait Photography ကို တတ်ကျွမ်း နားလည် ၍ ရေးသည် မဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော် သိလို သဖြင့် လိုက်လံ ရှာဖွေ ဖတ်ရှု ခဲ့သည်များကို စုပေါင်းဘာသာပြန် ကာ ပြန် လည် မျှ ဝေခြင်းသားဖြစ် ပါသည်။
ထိုသို့ လေ့လာသည့် အတွက် Portrait Photography သည် သာမန် အားဖြင့် လူပုံ ကို ရိုက်သည်ဟုသာ သိထားသည် မှ လူ တင်သာမက သက်ရှိ သက်မဲ့ အားလုံး တို့ ၏ ရုပ်ပုံ လွှာ ကို ရိုက်ကူးခြင်း ဆိုသည် ကို သိ လိုက်ရပါသည်။
ယခု အကြိမ်တွင် လည်း Portrait Photography ကို ဆက်လက် လေ့လာ လိုသဖြင့် စုဆောင်း ဖတ်ရှု ခဲ့ရာ လက်တွေ့ အသုံးတည့် မည် ဟု ယူဆသည့် Nikon America -US မှ ထုတ် ဝေ သော Portrait Photography ဆိုင်ရာ ဆောင်း ပါး ၊ Peter Kolonia ၏ How to Create an Edgy Portrait With High-Contrast Lighting ဆောင်းပါး နှင့် ဆောင်းပါးရှင် Jmeyer ၏ Portrait photography techniques, tips and tricks ဆောင်းပါး များကိုတွေ့ ရှိခဲ့ ပါသည်။
ထို့ ကြောင့် အဆိုပါ ဆောင်းပါး သုံးခု ကို ပေါင်းစပ်ကာ ဆီလျှော် သကဲ့ သို့ ဘာသာပြန် ကာ မျှဝေ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤမှတ်စု သည် Portrait Photography အခြေခံ မှ စတင် ရိုက် ကူးသည့် အဆင့် မျှ သာရှိပါသည်။ ကျွန်တော်ကဲ့ သို့ Portrait Photography ကို စတင် ရိုက် ကူးရန် တာစူ နေသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ကာ မျှ ဝေ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါ အချက် များကို ဆောင်းပါးရှင် Jmeyer ၏ Portrait photography techniques, tips and tricks မှကောက် နှုတ် ဘာသာပြန် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(1) Focus on the eyes
Subject ၏ မျက်လုံးသည် ပုံ ကို ကြည့်သူ နှင့် တိုက် ရိုက် Contact လုပ်သည့် နေရာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မျက်လုံးကို Sharp Eyes ရအောင် AF Point ကို မျက်လုံးပေါ် တွင် ထောက် ရမည်။ Shutter Release Button ကို တစ်ဝက် နှိပ်ကာ Focus Lock လုပ်ပြီး Composition ကို လိုသလို ပြန် ညှိ ယူ ရပါမည်။
(2) Usingastandard or telephoto lens
Wide angle Lens သည် လူပုံ ကို Subject နှင့် ပတ်သက် နေသည့် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ရော၍ ပြ လိုသည့်အ နေအထားမျိုး တွင် အတော်အသုံး တည့် သည်။ သို့ ရာ တွင် Wide Angle Lens ကို အနီး ကပ် ဆွဲ ရိုက် လိုက်ပါက လူ ပုံ သည် ( Distort ) ပုံ ပျက် သွားသည်။
Portrait ရိုက်သည့် သမားရိုးကျ Full Frame Lens များ မှာ 50mm, 85mm prime Lens များ နှင့် 70-200mm Zoom Lens များ ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Lens များသည် Features ကို Compress လုပ်ပေးပြီး Natural-Looking ပုံ များ ကို ထုတ်ပေးသည်။
(3) Use Aperture Priority mode
Aperture Priority ဖြင့် ရိုက်ပါ။ ဤ သို့ ရိုက်ခြင်း ဖြင့် Depth of Field ကို လို သလို ချိန်ဆ ထားနိုင်ပါသည်။
Focusing မြန် သည့် Prime Lens များ ဖြစ်ကြသည့် Lens များသည် Aperture ကို များစွာ ကျယ် ကျယ် ဖွင့် နိုင်သည်။ ထို့ ကြောင့် အတော် ပါးသည့် Shallow Depth of Field ရသည့် အတွက် နောက် ခံ များ ၀ါး ကုန်သဖြင့် Subject အပေါ် အာရုံ စူး စိုက်မှု ရစေသည်။ ၄င်း အပြင် ပုံ သည် Creamy-smooth ရလာသည်။
သို့ ရာ တွင် ဤ ကဲ့သို့ Aperture ကျဉ်း ကျဉ်း ဖြင့် Shallow Depth of Field ရိုက် ရာ တွင် အရေးကြီး သည့် နေရာ ကို တိကျစွာ Focus ဖမ်း နိုင်ရန် လိုသည်။
(4) Using window light
Portrait ရိုက်ရာတွင် အစဉ်တန်ဘိုးကြီး သည့် Lighting များ မလိုပါ။ ပြူတင်းပေါက် အလင်း ရောင် နှင့် Reflector တစ်ခု လောက် နှင့်ပင် အတော် ကောင်းသည် Portrait ပုံ ရ နိုင်ပါသည်။
Model ကို ပြူတင်း ပေါက် အလင်းရောင် နှင့် Angle တစ်ခု ယူ လိုက်ပါ။ ယင်းနောက် Silver or White Reflector ဖြင့် အလင်း နည်း နေသည့် နေရာ ကို ဖြည့် ပေးပါ။ Silver Reflector သည် White Reflector ထက် Crisper Quality ပိုရသည်။
သို့ရာ တွင် ပြုတင်းပေါက်မှ ဖြတ်၍ ၀င် လာသည့် အလင်း ရောင်တွက် ပြင်ပ မှ စိုးမိုး လာနိုင်သည့် အရောင်များကို သတိထားရန် လိုသည်။ ပြင်ပ ရှိ မျက်ခင်းမှ လွှမ်း လာသည့် အစိမ်းရောင်သည် Skin Tone ကို Silky ဖြစ်လာစေသည်။ ညနေ ခင်း အလင်းရောင် လွှမ်း မိုး လာလျှင် Skin Tone သည် Warm ဖြစ်လာသည်။
(5) High-key portraits
ပုံ ကို တမင် Over Expose လုပ်ကာ “ High Key Effect “ ဖြင့် ရိုက်ခြင်း သည် မိန်းကလေး ပုံ နှင့် ကလေး ပုံ များ ရိုက်ရာ တွင် သုံး နိုင်သည်။ နူးညံ့ ပြေ ပြစ်သော ပုံ ရ ရှိ လာသည်။
ဤ နည်း ၏ လှည့် ကွက် တစ်ခု မှာ ရိုက်စဉ် တွင် Overexposed မရိုက် ဘဲ Post Production တွင် သာ Photoshop ဖြင့် ပုံ ကို လိုသည့် အလင်း ပမာဏ ရ အောင် လုပ် ခြင်း ဖြစ်သည်။ RAW File ဖြင့် ရိုက်ခြင်း သည် ဤ ကဲ့ သို့ Edit လုပ် ရာ တွက် ပို၍ ထိရောက်သည်။
(6) Baby portraits
ကလေး ငယ် များ၏ ပုံ ကို ရိုက်လျှင် သဘာဝ အလင်းရောင် သည် အကောင်းဆုံး ဖြစ် သည်။ Light Contrast ပေး နိုင်သည့် ပြူတင်းပေါက်လို နေရာ များ တွင် ရိုက် ခြင်း သည့် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ ISO အနည်း ဆုံး ထား ရိုက်သင့်သည်။ ဤ သို့ ဖြင့် Noise ကင်းစင် ၍ သန့် သည့် ပုံ ရ နိုင်မည်။
ခလေး ငယ် များကို ရိုက်ရာ တွင် နံနက် အိပ်ယာ ထ ကာစ သို့ မဟုတ် အစား အစာ ကြွေး ပြိးသည့် အချိန် တွင် ရိုက်သင့် သည်။ ထို အချိန် များ တွင် ခလေး ငယ်များသည် အခြားသော အချိန် များ ထက် တက်ကြွ လန်း ဆမ်း နေသည့် အတွက် ဖြစ်သည်။
(7) Shooting in burst mode
ခလေး ပုံ သို့ မဟုတ် Group Photo ရိုက်လျှက် ကင်မရာ ကို Tripod သို့ မဟုတ် ခိုင်ခန့်သည့် နေရာ တစ်ခုခု တွင် တင်ထားကာ ဆက်တိုက် ပုံ များများ ရိုက်ရပါမည်။ စက်သေနပ် ပစ် သကဲ့ သို့ High Frame Advance Rate မျိုး ကို ဆိုလို ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ပုံ များများ ဆက် တိုက် ရိုက်ခြင်း ကို ဆိုလို ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤ သို့ ဖြင့် Subject ၏ Expression အမျိုးမျိုး ကို ရနိုင်ပါမည်။ Group Phot တွင်မူ လူ အားလုံ မျက်လုံ ဖွင့် နေသည့် အချိန် ကို စောင့် ရိုက်ရန် လိုပါသည်။
(8) Family photo posing ideas
မိသားစု ပုံ ရိုက်သည့် အချိန် တွင် မိသား စုဝင် ကြီးစဉ် ငယ် လိုက် စီစဉ် ကာ ရိုက် ခြင်းသည် အခြားသော သူများအား မိသားစု ပုံ ပြင် ကလေး ကိုပြော ပြ နေဘိသကဲ့ သို့ ဖြစ်စေ ရမည်။
အိမ်ထောင်စု ၏ အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် အား မည်ကဲ့ သို့ နေရာ ချ မည် ၊ သို့ မဟုတ် အိမ်ထောင်စုအတွင်း အသစ် ၀င်ရောက်လာသူကို မည်သို့ နေရာ တွင် ထားမည် ဆိုသည်မှာ အရေး ကြီးသည်။ အဆိုပါ နေရာ သည် ပုံ ၏ အဓိက Focal Point ဖြစ်စေရမည်။ ပုံ တွင် ထင်း စွာ ပေါ်နေရမည့် နေရာ ဖြစ်စေရ မည်။
အိမ် အတွင်း ဆိုဖါ များရှိသည့်နေရာ ၊ အိမ် အပေါက် ၀ ကဲ့ သို့ နေရာ များ တွင် အချို့ ကို ထိုင် စေ၊ အချိူ့ ကို မတ်တပ်ရပ်စေ သည့် သဘောမျိုး ဖြင့် လူ အုပ် ခွဲ ကာ ရိုက် နိုင်သည်။
(9) Candlelight portraits
ဖယောင်း တိုင် အလင်းရောင် နှင့် ရိုက်သည့် ပုံမျိုး တွင် ISO ကို 1600 အထက် တင်ရိုက်ရန် လိုသည်။ Subjection ၏ လှုပ်ရှား မှု နှင့် ဖယောင်း တိုင်မီး တောက် များကို Freeze လုပ်ရန် High Shutter Speed ဖြင့် ရိုက်ရန် လို သည့် အတွက် Aperture ကို ကျယ်ကျယ် ဖွင့်ရန် လိုသည်။
အခန်း အတွင်း ရှိ မီးများကို ပိတ်ကာ Subject ၏ မျက်နှာပေါ် သို့ ကျရောက် နေသည့် အလင်းရောင် ၏ Meter ကို ဖမ်း ပါ။
Ccandlelit portrait shoot ရိုက်လျှင် ဖယောင်း တိုင် ကို တစ်တိုင် ထည်း မဟုတ်ဘဲ လိုသည် Exposure ရ သည့် အထိ ဖယောင်းတိုင် ကို အရေအတွက် တိုး၍သုံးပါ။ ဤ သို့ ဖြင့် Softer Shadow ရလာမည် ဖြစ် သည်။
ကင်မရာ Setting နှင့် ပတ်သက် သည့် ပိုင်း မှာ Nikon America-US က အကြံပြု ရေးသား ထား ချက် များ မှ ကောက်နှုတ် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Portrait ရိုက်ရန် အတွက် အောက် ပါ Lens များကို သုံးသင့် ပါသည်-
· Sstandard to short-telephoto lens, between 50mm to 200mm.
· NIKKOR prime lenses such as the 60mm, 85mm, 105mm or 200mm lenses;
· Zooms: 70-200mm, or the telephoto end of the 24-70mm, 24-120mm lenses are ideal choices.
အကယ်၍ Angle အလွန် ကျယ် သည့် 17mm ကဲ့ သို့ Wide Angle Lens ကို သုံးပါက Subject ၏ မျက်နှာသည် ကြွ တက်မလာဘဲ Flat ဖြစ်သွားပါမည်။
ထို့ နည်းတူစွာ ပင် Focal Length အလွန်ရှည်သည့် 300mm ကဲ့သို့ Lens ကိုသုံးလိုက်ပါက Subject ၏ မျက်နှာကို Compress လုပ် လိုက် မည် ဖြစ်သည်။ ဤ သို့ ဖြင့် သဘ၀ မကျ သော ပုံ ဖြစ်လာပေလိမ့် မည်။
White Balance Setting မှာ မူ ပတ်ဝန်းကျင် ၏ အလင်းရောင်ပေါ် တည်ကာ ချိန် ရန် လိုသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် အိမ်အတွင်းရှိသာမန် အိမ်သုံး အလင်းရောင်အောက် တွင် ရိုက် မည် ဆိုပါက Incandescent (it is the light bulb symbol) ကို ရွေးရပါမည်။ အကယ် ၍ Flash တစ်ခု တည်း ကိုသာ သုံးမည် ဆိုပါက Flash (it’s the lightning bolt symbol) ကို ရွေး ရပါမည်။ သို့ မဟုတ်ဘဲ Mix Light ကို သုံးမည် ဆိုလျှင် Custom Preset ကို သုံးရပါမည်။
Portrait စတင် ရိုက်စသူများ အနေနှင့် Matrix Metering သို့ မဟုတ် Center Weighted Average Metering ကို သုံးသင့်ပါသည်။
ပထမ ဦးစွာ ကင်မရာ Shutter ခလုပ်ကို တစ်ဝက် နှိပ်ကာ Subject ၏ မျက်လုံးကို ထောက် ၍ Focus ဖြတ်ခြင်း ဖြင့် Metering ယူရပါမည်။ ယင်းနောက် AE Lock ကို နှိပ် ကာ လို အပ် သလို Recompose ပြန်လုပ် ရပါမည်။ သို့ မဟုတ်ပါကလည်း Shutter ခလုပ်ကို တစ်ဝက် နှိပ် ထားလျှက် Recompose ပြန်လုပ် နိုင်ပါသည်။
Data - D300, AF-S NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF lens, 1/30 sec., f/2.8, ISO 400, aperture priority, matrix metering,
အထက်ပါပုံ ကို ရိုက်ရာ တွင် White Balance ကို Flash တွင် ထားပါသည်။ SB-900 Flash Light ကို အထက်သို့ အနည်းငယ်ထာင်ကာ အနောက်တွင် Reflector ခံ ကာ ရိူက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Subject ၏ Skin Tone သည် မှန်ကန်စွာ ပေါ်လာသော်လည်း Tungsten Lighting ကြောင့် နောက်ခံ တွင် Warmer Color ဖြစ်သွားသည်။
Data - D800, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II lens, 1/125 sec., f/5, ISO 100, aperture priority, matrix metering, built-in pop-up fill-flash.
အထက်ပါ ပုံ တွင် Focus ကို Subject ပေါ် တွင် ဖြတ်ထားသည့် အတွက် Subject ပြတ်သားနေသည်။ ။ Aperture ကျယ် သည့်အတွက် နောက် ခံ အုတ်နံရံ သည် တစ်ဖြေးဖြေး ၀ါး သွား သည် ကိုတွေ့ နိုင်သည်။
Subject ကို Focus ဖမ်းရာ တွင် မျက်လုံးကို ပြတ်သားနေအောင် Single Point ဖြင့် Focus ဖမ်း သင့်ပါသည်။ အဆိုပါ နေရာ သည် အပြတ်သား ဆုံး ဖြစ်နေစေရန် လိုပါ သည်။ Subject သည် Frame ၏ အလယ် တွင် မရှိပါက Active Focus Point ကို Subject ရှိရာ သို့ တတိတိ ကျကျ ရောက်နေအောင် ရွှေ့ ယူ ရပါမည်။
သို့ မဟုတ်ပါက လည်း Subject ၏ မျက်လုံးကို Focus ဖမ်းပြီးနောက် AF-Point Lock လုပ် ကာ လိုအပ်သလို Recompose လုပ် နိုင်ပါသည်။
Suggested Exposure Starting Points:
ဓါတ်ပုံ တစ်အတွက် Exposure သည် Shutter speed, Aperture and ISO sensitivity တို့ ပင် ဖြစ်သည်။ Exposure ကို မည် သို့ Setting လုပ် မည် မှာ မူ မိမိ ရိုက်သည် နေရာ ၏ အလင်း ရောင် ပေါ် မူတည်သည်။
အစ ပိုင်း မျာ ISO 400, Aperture – f-5.6, Aperture Priority လောက် နဲ့ စသင့်ပါသည်။ Aperture f-5.6 ထားရခြင်း မှာ Background ကို ထိန်း ထားနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ Shutter Sped ကိုမူ Aperture နှင့် လိုက်လျှော ညီထွေ သည့် Shutter Speed ကို ကင်မရာ ကရွေး ပေး ပါ လိမ့် မည်။ Shutter Speed သည် အနည်း ဆုံး 1/100 Sec လောက် ရှိသင့်သည်။
Aperture ကို အလွန် ကျယ်ကျယ် ဖွင့် လိုက်ပါက Shallow Depth of Field ဖြစ်လာသောကြောင့် နောက်ခံ များ ၀ါး သွားသော်လည်း ပြတ်သားသည့် ဧရိယာ ကျုံ့ လာသည့် အတွက် Subject ၏ လိုအပ်သော အပိုင်း များ ပြတ်သား မှု ရှိ မရှိကို ပြန် စစ်ရန် လိုပါမည်။
UsingaSpeedlight.
အလင်း ရောင်လုံလောက်မှု မရှိပါက Speed Light ကို Fill in Light အဖြစ်သုံး ရပါမည်။ Portrait ရိုက်ရာ တွင် Lighting သည် အလွန် အရေးပါသည့် အပိုင်း တွင် ပါဝင်ပါသည်။ များစွာ လည်း ကျယ်ပြန့် ပါသည်။ ဤနေရာ တွင်မူ အခြေခံ သဘော မှ သာ ဖေါ်ပြပါမည်။ Lighting သည် Portrait Photography တွင် သီးခြားဘာသာရပ် တစ်ခု သဘွယ် ကျယ် ပြန့် ပါသည်။
Lighting System ကို ဆင်ပြီး ပါ က အစမ်း ရိုက်ကြည့်ပါ။ Subject ၏နောက်တွင် Harsh Shadow ဖြစ် မသွားစေရန် သတိထားရပါမည်။ အမြင့် (၁၀) ပေ ခန့် ရှိ အခန်း အတွင်း ရိုက်ပါက Flash ကို မျက် နှာ ကျက် နှင့် Bounce လုပ်ကာ ရိုက်သင့် ပါ သည်။ သို့ ရာ တွင် အဆိုပါ Lighting တွင် Boumce လုပ်ရာ Bounce လုပ်ရာ မျက် နှာ ပြင် ၏ အရောင် ပါလာ တတ် သည်ကို သတိပြု ရပါမည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင် Multiple SpeedLights များကို သုံးသင့် ပါသည်။ အခန်း တွင်း ရှိ Lighting Sources များကို လည်း ရနိုင်သမျှ သုံး ရပါမည်။
Subject အပေါ် အလင်း ဖြော့ဖြော့ ကျလိုသော နေရာ တွင် Diffuser ကို သုံးရပါမည်။
Speed light ကိုသုံး သည့် အခါ Setting လုပ်ရာ တွင် သတိထားရ မည်မှာ Flash ၏ Sync speed သည် ကင်မရာ Shutter Speed ထက် မြန် ရန် လိုပါမည်။ ဥပမာ အား ဖြင့် Sync speed is 1/250 Sec. ဖြစ်ပါက Shutter Speed သည် 1/250 Sec ထက်မြန် ၍မရပါ။ Shutter speed သည် Sync speed ထက်မြန် ပါက Shutter ပိတ်ပြီးမှ Flash ပွင့် သလို ဖြစ်သွား ပါမည်။
နမူနာ ပုံ များ နှင့် Data များ
Data - D300, AF-S NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF lens, 1/30 sec., f/2.8, ISO 400, aperture priority, matrix metering, SB-900 flash.
အထက်ပါ နမူနာ ပုံ တွင် Subject နှစ်ဦး စလုံး အပေါ် သို့ တိုက်ရိုက် ထိုး ကာ ရိုက်တားသည်။ အကြောင်း မှာ Shallow Depth of Field ဖြစ်သည့် ပုံ တွင် Subject ပေါ် တွင်သာ Focus ဖြတ် ထားပြီး Foreground နှင့် background တို့ ကို Focus မဖြတ် ထားသည့် အတွက် ဖြစ်သည်။
Data - D800, AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR lens 1/250 sec., f/4, ISO 100, aperture priority, matrix metering.
အထက်ပါ နမူနာ ပုံ တွင်မူ Subject ၏ မျက်နှာ တစ်ပိုင်းသည် သဘာဝ နေရောင်ဖြင့် လင်းနေပြီး ကျန် တစ်ပိုင်း မှာ ခေါင်းပေါ် ရှိသစ် ကိုင်း ၏ အရိပ်ကျ ကာ မှောင် နေသည်။
Data - D800, AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR lens 1/250 sec., f/4, ISO 100, aperture priority, matrix metering, SB-900 used as fill-flash.
ထို့ကြောင့် SB 900 ဖြင့် Fill in အလင်းဖြည့် ကာ ရိုက်ထားသဖြင့် အလင်း မျှ သွားသည် ကို မြင်နိုင်သည်။
Data - D800, AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR lens 1/640 sec., f/4, ISO 100, aperture priority, matrix metering.
အထက်ပါ နမူနာ ပုံ တွင် Subject သည် ကင်မရာ ကို ကြည့်နေသည်။ Subject ၏ ညာ ဘက်မှ ၀င်လာသည့် နေရောင်ချည် သည် အဓိက Light Source ဖြစ်သည်။ အလင်းသည် Subject ၏ မျက်နှာ ပေါ် သို့ တစ်ဝက် ကျနေသည်။ နေရောင် နှင့် ဝေးသော မျက်နှာ၏ အပိုင်း မှာမူ မှောင်နေသည်
ဤ ကဲ့ သို့ အခြေ အနေမျိုး တွင် အဆိုပါ ကင်မရာ ကို တည့် တည့် ကြည့်နေသည့် အနေအထားမှ အထက်ပါ ပုံကဲ့ သို့ အလင်းရောင် လာ ရာ ဘက် သို့ လှည့် ကြည့် လိုက်သည့် ပုံ တွင်မူ ပုံ သည် Dynamic Feel ပို ရလာသည်။
အထက်ပါ Nikon US မှ ဖေါ်ပြထားသည့် Portrait Lighting သည် သာမန် ထသွား ထလာ ရိုက် သည့် အဆင့် မျိုး မျှ ကို ဖေါ်ပြထားခြင်း ဖြစ် ပါသည်။ ကျွန်တော် သဘော ပေါက် အရွေ့ မှာ Portrait Lighting သည် အတော် အရေးပါ ၊ အဆင့်မြင့် သည့် အနေအထားတွင် ရှိပါသည်။ Portrait Photograph တွင် Lighting သည် အလွန်ကျယ် ပြန့် သည့် ဘာသာ ရပ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Nikon Note ၏ အနှစ်ချုပ် အချက်အလက်များ
· Primes: 60mm, 85mm, 105mm or 200mm
· Zooms: 24-70mm, 24-120mm, 70-200mm
· Match the light of your scene
· If your main light source is your Speedlight, set the WB to Flash
· Matrix Metering
· AF-S mode for focus lock
· Single Area AF
· Center AF Bracket for very best result
· Don’t shoot wide open unless you wantavery shallow depth-of-field. If you are shooting wide open, check the focus of the image after you’ve captured it at 100% playback zoom.
· Turn on the audible beep and focus assist lamp.
· If manually focusing use Rangefinder and check results at 100% playback zoom.
· Minimum 1/100th ofasecond shutter speed
· If the lighting in the scene is not enough forashutter speed/aperture combination that you want to use (i.e. too slow for you to handhold), increase the ISO
· Watch for shadows. You can soften shadows by using the diffuser that came with your Speedlight or bouncing the light.
· Bounce off of low, white ceilings (under 10’).
· Remember the sync speed of the camera, and do not exceed that shutter speed unless you are using the FP high speed sync setting
· If your subject is backlit, use fill-flash, with the dome attachment and don’t bounce.
အောက်ပါ Light Contrast ဆိုင်ရာ အချို့ သော အချက် များ ကိုမူ ဆောင်းပါးရှင် Peter Kolonia ၏ How to Create an Edgy Portrait With High-Contrast Lighting မှ ကောက် နှုတ် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိပ် တန်း Portrait ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင် များသုံးသည့် လှပ ကြွ ရွ သော Light Contrast ရ ရန် ပြင်ဆင်သည်ကို အနည်း ငယ် ဖေါ်ပြ လိုပါသည်။
(Tanzanian model Flaviana Matata )
Data - Exposure: 1/125 sec at f/11, ISO 100.
အထက်ပါ ပုံ ကို နံမည် ကျော် New York fashion and advertising Professional Photographer Jodi Jone က တန်ဇားနီးယား Model Flaviana Matata ကို ရိုက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ Spike Hair Style နှင့် Model ကို လှပ သည် Light Contrast ဖြင့် ရိုက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့ သို့ ပုံ ရရန် သုံးထားသည့် Light Sources များကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။
မည်သည့်အတွက် ဤ ကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေး အဆင့်မြင့် လှ သည့် Lighting များ ဆင်ထား ရသည်ကို ဓါတ်ပုံ ပညာရှင်က ရှင်းလင်း ထားပါသော် လည်း ကျွန်တော် အပါအ၀င် Portrait Photography ကို ယခု မှ စတင် လေ့လာ သူများ အတွက် “ လေး “ နေမည်ဖြစ်သည့် အတွက် ဘာသာပြန် ခြင်း မပြုတော့ပါ။
အောက်ပါပုံ များ မှာ အထက်ပါ Model ကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရာ တွင် အသုံး ပြု သည့် Light Source များ ဖြစ်ကြပါသည်။
Broncolor Pulso G 1600 strobes (replaced by the G2),
Broncolor Pulsoflex C softbox .
အထက်ပါ Model ကို ရိုက်ရာ တွင် Studio အတွင်း ဆင်ထားသည့် Light source များ ဖြစ်ပါသည်။
(A). Set the softbox onaManfrotto 085BS Heavy Duty Black Light Boom and Stand,
(B). Lit the backdrop,a20x30-foot cyclorama,
(C), with two Pulso G heads,
(D) Mounted on 9-foot Manfrotto Alu Ranker light stands,
(E) and bounced into V-flat reflectors made of 1/2-inch white foamcore board ,
(F). Powered both the main and background lights with Broncolor Scoro S 1600 powerpacks,
(G) and shot withaHasselblad H4D-40 digital camera anda50mm f/3.5 HC II Hasselblad lens,
(H), firing the strobes withacamera-mounted Broncolor RFS2radio slave transmitter.
Portrait Sample Pictures
အထက်ပါ ဖေါ်ပြချက်များသည် Portrait Photography အတွက် ခြေ ဆင်း ကြမ်းခင်း မျှ သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ဘာသာရပ် ၏ အမြင့်တန်း ဆိုင်ရာ ပညာ ရပ် များ နှင့် အလွန် ကျယ်ပြန့် လှ သည့် Portrait Photography Lighting ဆိုင် ရာ များကို အဆင့်ဆင့် လှမ်း တက် လေ့ လာ ရန် လိုပါမည်။ ဤမှတ်စုသည် အဆိုပါ အဆင့် များသို့ တက်လှမ်း နိုင်ရန် တံတားခင်း ပေးသည့် အဆင့်မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြ အပ်ပါသည်။
ဆရာ ဦးစိုးလှိုင် (Country Road)
ဆောင်းရာသီ အပူကန် လည်ချောင်းနာအတွက် ဆေးတစ်ခွက်
Saturday, November 22, 2014 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
ဆောင်းရာသီ ကဲ့သို့ အေးမြတဲ့ ရာသီရောက် လာတဲ့ အခါတိုင်း၊ ခန္ဒာကိုယ်တွင်း အပူဓာတ် များသူတွေမှာ အပူကန် ထွက်လာပြီး လည်ချောင်း နာလေ့ရှိကြ ပါတယ်။ အဲဒီလို အပူဓာတ် များသူတွေ အဖို့ ခါတိုင်းထက် ရေပိုသောက်ပေး ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ပုံမှန် ရေချိုးနေကျ အတိုင်း တစ်နေ့ ၂-ကြိမ် (သို့ မဟုတ်) အနည်းဆုံး ၁-ကြိမ် နေ့ စဉ်ရေချိုးပေး ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား များများ လုပ်ကာ၊ ကောက်ညှင်းပေါင်းလို ၀မ်းချုပ်စားတွေ မစားဘဲ၊ သင်္ဘောသီး၊ ဌက်ပျောသီးတို့ လို ၀မ်းနူးစာတွေ ကို စားပေး သင့်ပါတယ်။ အပူကန်၍ လည်ချောင်းနာတဲ့ ဝေဒနာဟာ လည်ချောင်းထဲကို မီးစနဲ့ ထိုးခံရသလို
ပူစပ်ပူလောင် ခံစားရပြီး၊ အာသီးရောင်သကဲ့ သို့တံတွေးမြိုချတဲ့ အခါတိုင်း နာတဲ့အပြင်၊ လည်ချောင်းထဲက
ယား၍ချောင်းဆိုး တတ်ပြန်တာကြောင့် အင်မတန် ခက်ရခက်တဲ့ ဝေဒနာတစ်မျိုးပါဘဲ။ ဒိအတွက် စိတ်ညစ် မနေပါနဲ့ ။ ဟောဒီမှာ ဆေးကောင်း တစ်လက် ရှိပါတယ်။ ဒီဆေးဖော်စပ်နည်းက လုပ်ရ တာလွယ်ကူလို့အထင် မသေးလိုက်ပါနဲ့ .ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိဘဲ ပျောက်ကင်း သက်သာသွားစေမယ့် ဆေးကောင်း တစ်ခွက်ဖြစ် လို့ ပါ။
သဘာဝ ပျားရည်စစ်စစ်၊ သံပုရာသီး၊ ဂျင်း စတဲ့ ပစ္စည်း ၃-မယ်ရှိရင် ဆေးဖော်စပ်ဖို့ ရပါပြီ။ (၁၀၀% သဘာဝပျားရည်စစ်စစ် ကို City Mart ဆိုင်များနဲ့ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သံပုရာသီး ၁-လုံး ကို အစေ့ဖယ် အရည်မညှစ်ဘဲ ခပ်ပါးပါး အချပ်လေးတွေ လှီးပေးရပါမယ်။ ဂျင်း လက် ၂-ဆစ်ခန့် ကို အခွံနွှာပြီးနောက် ခပ်ပါးပါး အချောင်း မျှင်မျှင်လေးတွေရ အောင် လှီးဖြတ်ပါ) စောစောက လှီးဖြတ်ထားတဲ့ သံပုရာသီး အလွှာချပ်လေးတွေနဲ့ဂျင်းအချောင်းလေးတွေကို ခြောက်သွေ့ သန့် ရှင်းတဲ့ ဖန်ပုလင်း လွတ် ၁-လုံးထဲမှာ ထဲ့ပြီး၊ ၄င်း တို့ မြုပ်ရုံ ပျားရည် စစ်စစ်ကို အပေါ်က လောင်းချပေးပါ။ ပြီးရင် ဖန်ပုလင်း လေလုံအောင် အဖုံးကို ကျပ်ကျပ်ပိတ်၍ ထိုအရောအနှော ၃-မျိုး ဂျယ်လီပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ အထိ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထား ရပါမယ်။ ဂျယ်လီဖြစ်လာ တဲ့အခါ ၄င်းကိုဇွန်းနဲ့ ခပ်ကာ မတ်ခွက် တစ်ခွက်ထဲပြောင်းထဲ့ပြီး ရေနွေးဆူဆူလောင်းချ၍ ခပ်နွေးနွေး အနေအထားမှာ စားလို့ ရ ပါပြီ။ ပျားရည်နဲ့ဓာတ်ပြုထားတာကြောင့် သံပုရာခွံကို ၀ါးစားလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီအချိုးအစားအတိုင်း တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ကျ
သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ၃-ရက်မျှကြာတဲ့အခါ အပူကန်လည်ချောင်းနာများ ပျောက်ကင်းသွားပါ လိမ့်မယ်။ (ပုလင်းဖုံး လုံလုံပိတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ မှာ ၂လ ၃ လ ကြာတဲ့အထိ သိမ်းထားလည်း ဆေးဓာတ် မပြယ်နိုင် ပါဘူး)
Bridge Camera ဝယ်မယ်ဆိုရင်...!
Saturday, November 22, 2014 Photography ပညာရပ်ဆိုင်ရာ
ဒီနေ့တော့ Photography အကြောင်းမဟုတ်ပဲ Buying Guide လေးပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆွေးနွေးတာပေါ့..။ ကျွန်တော်အခုရေးခဲ့တဲ့ Tutorial တွေထဲမှာတော်တော်များများက DSLR မဟုတ်ပဲ ..။ Bridge Camera လေးတွေနဲ့ ရိုက်လို့ရပါတယ်..။
Bridge Camera ဆိုတာ Point & Shoot ထက် အဆင့်မြင့်ပြီး..။ DSLR နီးပါး အသုံးပြုလို့ရတဲ့ High End Compact Camera လေး တွေဖြစ်ပါတယ်..။ အားသာချက်က...။ DSLR တွေလို Lens လဲစရာ မလိုပါဘူး..။ သယ်ရတာလွယ်ကူတယ်..။ အလုပ်ရှုပ်သက်သာတယ်..။ Landscape ကနေ Tele Shot အထိ Range တော်တော်စုံစုံ ရိုက်လို့ရတယ်..။ (DSLR သမားတွေ မဝယ်နိုင်တဲ့ Long Range Tele Lens တွေထက် ပိုပြီး ဝေးဝေး ရိုက်နိုင်ပါတယ်..။ Quality ကတော့ ချွင်းချက်ပါ..) Macro လည်းရပါ တယ်..။ နောက်ဆုံးအချက် က ဈေးသက်သာတယ် (DSLR ထက်)..။
အားနည်းချက်က DSLR တွေမှာပါတဲ့ APS-C Sensor လောက်တောင် မကြီးပါဘူး..။ Full Frame နဲ့ ဆိုအကွာကြီးပေါ့..။ ISO သိပ်မနိုင်ပါဘူး..။ Quality ကတော့ DSLR ကိုမမှီပါ..။ ဒါပေမယ့် တော်တော်လေး အလုပ်ဖြစ်တဲ့ Quality ကိုရပါတယ်..။ အောက်မှာ ကျွန်တော် DSLR မဝယ်ခင်က သုံးခဲ့တဲ့ Sony DSC-H7 Bridge Camera လေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ တွေ ပြထားပါတယ်...။ သူ့ရဲ့အဓိက အားသာချက်က ဓာတ်ပုံကိုလည်း ဝါသနာပါတယ်..။ မိသားစု အခရီးသွားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်...။ သွားရင် လာရင်း.. ဝါသနာအရ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်း လိုချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပါတယ်...။
Point & Shoot နဲ့ DSLR ကြားက Bargain ပါပဲ..။ ကျွန်တော်တို့ နဲနဲလေး နက်နက်နဲနဲ လေ့လာ ရအောင်..။
Bridge ဝယ်မယ်ဆိုရင် Canon နဲ့ Nikon အပြင် Sony နဲ့ Panasonic ကို ထည့်စဉ်းစား ရပါမယ်..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Sony က နာမည်ကြီး Carl Zesis Lens ကိုသုံးထားပြီး..။ Panasonic ကတော့ Leica Lens ကို သုံးထားလို့ပါပဲ...။ (Carl Zeiss နဲ့ Leica ဟာ အင်မတန်ဈေးကြီးပြီး Quality အရမ်းကောင်းတဲ့ Camera နဲ့ Lens ထုတ်လုပ်တဲ့ Company တွေပါ..။ German Made ပါ :D )
ထုံးစံအတိုင်းအမျိုးအစားလိုက် အားနည်းချက် အားသာချက်ရှိပါတယ်..။ တစ်ချို့ Bridge တွေက Lens ရဲ့ Range ကို အသားပေးပါတယ်..။ ဥပမာ Nikon Coolpix P510 မှာဆို 24-1000mm Range အထိ ရပါတယ်..။ Sony ရဲ့ Cyber-Shot DSC-HX200 မှာတော့ fps (frame per second) ကို ကြောက် မက်ဖွယ် 10 fps အထိပေးထားပါတယ်..။ ကျွန်တော့် Canon EOS 7D တောင် 8 fps ပဲ အမြန်ဆုံးရပါ တယ်..။ (ဈေးသက်သာပေမယ့်... အဲ့လို မတန်တဆ အားသာချက်တွေရှိပါတယ်..။) Canon PowerShot SX40 HS ကြတော့ 10.3 fps အထိပေးထားပြီး..။ Lens မှာ သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော် IS (Image Stabalization System) နဲ့ USM (Ultra Sonic Motoring System) ကို တစ်ခါထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါ တယ်..။ ဒီလိုမျိုး အပြိုင်အဆိုင်တွေရှိပါတယ်..။
ကျွန်တော့် Taste အရဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်က Image Ratio ကို ပထမစကြည့်ပါတယ်..။ Photography ရဲ့ လက်ရှိ Standard ဟာ 3:2 ratio ဖြစ်ပါတယ်..။ တစ်ချို့ Bridge တွေမှာ Point & Shoot တွေက အတိုင်း 4:3 Ratio ပဲ ပါပါတယ်..။ 4:3 Ratio ဆိုတာက ပုံထွက်လာရင် လေးထောင့်စပ်စပ်နဲ့ ကြည့်ရတာ တစ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ratio ပါ..။
ဥပမာ iPhone ဆိုရင်လည်း 4:3 ratio ပါ...။ ဒီတော့ သုံးသည် ဖြစ်စေ မသုံးသည် ဖြစ်စေ Ratio စုံစုံလေး ပါတာကို ပထမ အချက် အနေနဲ့ ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်..။ ဒီလို Ratio လေးတွေပါ...။ 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 (Sony မှာတော့ များသောအားဖြင့် 3:2 မပေးပါ)
နောက်တစ်ချက်က Screen Size ကို ကျွန်တော် ကြည့်ပါတယ်..။ အခု ကျွန်တော်အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ သုံးလုံးမှာ Canon က လွဲလို့ ကျန်တဲ့ ၂ မျိုးစလုံးက 3" Screen Size ဖြစ်တဲ့အတွက် အားသာချက် ရှိပါတယ်..။ Screen Size ကြီးတာဟာ ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ကောင်းမကောင်း ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အရမ်းအရေးပါပါတယ်..။ အရင် Canon 400D လို Nikon D40 လို DSLR ကိုင်ဖူးတဲ့ သူတွေ သိပါလိ့မ်မယ်..။ ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံက ကောင်းနေ သည့်တိုင် ..။ DISPLAY မှာ ပြန်ကြည့်တော့ ဝါးတားတားဆိုတော့ တော်တော် ဇဝေဇဝါ ဖြစ်ရပါတယ်..။ ဒါကြောင့် Screen Display ကြီးဖို့လို သလို...Sceen Dots လည်းများ ဖို့လိုပါတယ်..။
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ၃ မျိုးထဲမှာ Canon က Screen Dot အနဲဆုံးဖြစ်ပြီး 230,000 ပဲ ပါပါ တယ်..။ Nikon ကတော့...။ Screen Dot 921,000 ပါပြီး..။ Sony က 921,600 နဲ့ Screen Dot အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါ တယ်..။ Sensor Size ကတော့ သုံးခုစလုံး အတူတူပါပဲ..။ Mega Pixel အနေနဲ့ Canon က 12.1 MP, Nikon 16.0, Sony 18.0 ဖြစ်ပါတယ်..။
Auto Focus System မှာတော့ Canon နဲ့ Sony က Function ၇ မျိုးအထိပါပြီးအကောင်းဆုံး ဖြစ်နေပြန် ပါတယ်..။ Nikon က ၅ ခုသာ ပါပါတယ်..။ Digital Zoom မှာတော့ Canon က 4x နဲ့ အများဆုံး Magnify လုပ်နိုင်ပါတယ်..။ Nikon နဲ့ Sony ကတော့ 2x ဆီ ပါပါတယ်..။
အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့..။ Shutter Mode မှာ Canon က Slow Shutter Speed 15s အထိပဲပါပြီး..။ Sony ကတော့ DSLR တွေအတိုင်း 30s အထိပေးထားပါတယ်..။ High Shutter Speed မှာတော့ Canon က 1/3200s အထိရပြီး Sony က 1/4000s အထိရနေပါတယ်..။
သုံးမျိုးစလုံးပါ Pop-Up Flash နဲ့ View Finder ပါပါတယ်..။ White Balance Preset က Canon ၆ ခုပါပြီး..။ Nikon မှာ ၅ ခုပါ ပါတယ်..။ Sony မှာကတော့ ၇ ခုအထိပါတာတွေ့ရပါတယ်..။ ISO မှာ အားလုံး 100 အထိ ရိုက်နိုင်ပါတယ်..။ Canon နဲ့ Nikon က 3200 အထိ တင်နိုင်ပြီး..။ Sony က DSLR တွေအတိုင်း 12800 အထိ တင်နုိုင်ပါတယ်..၊ (Result ကတော့ စကားပြောမယ် ထင်ပါတယ်)
Metering Mode ကတော့ Sony နဲ့ Canon မှာ ၃ ခုစီပါပြီး..။ Nikon ကတော့ ၄ ခုအထိ ပါပါတယ်...။
ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော်သာ ဝယ်မယ်ဆိုရင်အထိကထားပြီး လေ့လာမယ့် အချက်တွေဖြစ်ပါ တယ်.။ တစ်ခြား Size တို့ Battery သက်တမ်းတို့..။ အလေးချိန်တို့ စသဖြင့် လိုက်ယှဉ်ကြည့် လို့ရပေမယ့်..။ ကျွန်တော်ကတော့ ဓာတ်ပုံ quality နဲ့ ဆိုင်မယ့်ဟာတွေကိုပဲ စဉ်းစားစေချင် ပါတယ်..။
အခုကျွန်တော်ပြောသွားတာက Bridge တွေပါ..။ Canon က ထုတ်တဲ့.. G1X လို ဟာမျိုးတွေ..။ Nikon နဲ့ Sony က ထုတ်တဲ့ Mirrorless Camera တွေနဲ့ Line Up ချင်းမတူပါဘူး..။ ရောမှာစိုးလို့ပါ..။ ကျွန်တော် အခုပြောတဲ့ဟာတွေက တကယ့် High End Compact တွေပါ..။ RAW File ပါ ရိုက်လို့ရပါတယ်..။ Mirrorless တွေဆိုရင် Sensor Size က APS-C ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီလောက်ဆိုရင် Bridge တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေကို သတိထားမိလောက် ပါပြီ..။ Brand အစွဲမထားပဲ ပြောရမယ်ဆိုရင် အပေါ်က သုံးလုံးကို ယှဉ်ကြည့်ပါက ကျွန်တော်သာဆိုရင် Sony ကို ရွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီနေရာမှာ အထူး သတိထားရမှာက ဈေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်..။ သက်သာချင်လို့ Bridge ဝယ်ကာမှ Entry Level DSLR တွေထက် ဈေးများနေမှာလည်း ဆိုးရပါတယ်..။ Your Decision Is Your Choice ပါပဲ..။
Budget အကန့်အသတ် ရှိနေလို့ DSLR မဝယ်နိုင်ပေမယ့် Photography အပေါ် တကယ် စိတ်ဝင် စားသူများအတွက်ရော..။ မိသားစုရဲ့ ပျော်စရာ ခရီးလေး တစ်ခုအတွက် မှတ်တမ်း တင်နိုင်မယ့် Camera ကောင်းကောင်းလေး တစ်လုံးရဖို့အတွက်ရော ဗဟုသုတ တစ်ခု အနေဖြင့် ရေးသားပေး လိုက်ပါတယ်..။
P.S - ကျွန်တော့် Bridge Camera လေးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်လောက်က Model လေးပါ..။ သူတောင် အခုအောက်မှာ ပြထားသလောက် ရိုက်လို့ရရင်..။ အခုနောက်ပိုင်းဟာတွေဆို စဉ်းစားကြည့်လို့ ရပါတယ်..။
Fast Shutter Speed!
Depth Of Field...!
Sony CyberShot DSC HX200
My Very First & Old Sony DSC-H7
မလိုလားအပ်သော ယူရစ်အက်ဆစ်များကို သဘာဝနည်းဖြင့် လျော့ချနည်း
သွေးထဲရှိ မလိုလား အပ်သော ယူရစ်အက်ဆစ် များကို၊ ဘေးဘယာ ကင်းဝေးစွာဖြင့် အောက်ပါ နည်းလမ်း(၃) သွယ်ကို သုံး၍ လျော့ချနိုင် ပါတယ်။
(၁) ရေက ကျောက်ကပ်ကို ကောင်းစွာ အလုပ် လုပ်စေပြီး၊ ယူရစ် အက်ဆစ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ် ပြင်ပသို့ ဆီးအဖြစ် စွန့် ထုတ်နိုင် အောင်
ပံ့ပိုးကူညီပေး ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရွယ်ရောက်ပြီး သူ ကျား-မ အားလုံး တိုင်းဟာ နေ့ စဉ် သန့် ရှင်းသော သောက်ရေ သန့် ကို ၂ လီတာမှ ၃ လီတာခန့် အထိ သောက်သုံးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ မှန်ကန်သော ရေသောက် နည်းကတော့၊ တကြိမ်တည်းမှာ ရေတွေ အများကြီး သောက်သုံးခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ ရေနည်းနည်း စီကို မကြာခဏ ဆိုသလို သောက်သုံးပေး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) မုန့် ဖုတ်ဆော်ဒါက ယူရစ်အက်ဆစ်တွေကို ကောင်းစွာချေဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၈ အောင်စ ပမာဏ ရှိသော သောက်ရေထဲ ကို မုန့် ဖုတ်ဆော်ဒါ စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်ခန့်ရောဖျော်၍သောက်ပေး ရမှာပါ။ ၄င်းဆေးရည်ကို သောက်သုံးရမည့် အချိန်များ ကတော့ ညအိပ်ယာမ၀င်ခင် (သို့ မဟုတ်) နံက် အိပ်ယာထ ချိန် (သို့ မဟုတ်) နေ့ လည်စာစားပြီးချိန် နှင့် ညစာမစားမီ ကြားကာ လအတွင်းမှာ မိမိအဆင်ပြေ သလို သောက်သုံးပေးနိုင် ပါတယ်။ (သတိပြုရန်။ မုန့် ဖုတ်ဆော်ဒါမှာ ဆိုဒီယမ်ဓာတ်မြင့်မားစွာ ပါရှိ နေ တာကြောင့်၊ ဟင်းလျာ နှင့် အစားအစာတွေမှာ အငံလျော့စားပေးပါ။ အကယ်၍ သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်လေ့ ရှိသူများအဖို့ ထို ဆေးရည်ကို ချင့်ချိန်၍သောက်ပါ)
(၃) ပူရင်း(purine )ဓာတ်များသော အစားအစာတွေက ယူရစ်အက်ဆစ်ပမာဏကို တိုးပွားလာစေနိုင် တာကြောင့်၊ ၄င်းဓာတ်ပါရှိ သော အစားအစာများကို အထူးရှောင်ရှား သင့်ပါတယ်။ ပူရင်းဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အမဲသား၊ ၀က်သား၊ ဆိတ်သားတို့ လို အနီရောင် အသားများ၊ ကြက်-ဘဲ-ဘဲငန်းတို့ ၏ အရေခွံများ၊
ပင်လယ်စာများ၊ တရိစ္ဆာန် ကလီစာများ စားသုံးမှုကိုရှောင်ပါ။ အယ်လ်ကို ဟောလ်ပါသော အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်တို့ ကလည်း ယူရစ်အက်ဆစ်ကို တိုးပွားလာစေနိုင်ပါတယ်။ ပူရင်းဓာတ် ပါဝင်မှုနည်းသော တူနာငါး၊ ဆဲလ်မွန်ငါး စားပါ။ အဆီထုတ်ထားသော နွားနို့သောက်ပါ။ စတော်ဘယ်ရီ၊ ချယ်ရီ၊ စပျစ်၊ နာနတ်၊ ပန်းသီး၊ ရှောက် သီး၊ သံပရိုသီး၊ လိမ္မော်၊ မုန်လာဥနီ၊ သခွားစတဲ့ အသီးအနှံများစားပါ။ ကစီဓာတ်ပါသော်လဲ ပူရင်းဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ပေါင်မုန့်၊ သစ်သီးခြောက်၊ ဆန်၊ ခေါက်ဆွဲ တို့ စားပေးပါ။ ဗိုစားပဲသီး၊ ဂေါ်ဖီ နှင့်
ဆလတ်ရွက်အပါအ၀င် အမျှင်ဓာတ်များသော စိမ်း ရောင်ခြယ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ များများစားပါ။ သင်္ဘောသီးအစိမ်းကို အတုံးလေးတွေ တုံးကာပြုတ်ပြီး၊ လ္ဘက်ခြောက်ခပ်၍ ရောသောက်ပါ။
Saturday, November 22, 2014 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ၄-ရာစုနှစ်ခန့် မှစ၍၊ အပျိုဖော်/ လူပျိုဖော် ၀င်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အသေး စိပ်ကြိုတင် စီစဉ်သော မင်္ဂလာပွဲများကို ဆောင်ကြဉ်း လာခဲ့ကြ ပါသည်။ အေဒီ ၁၀၀၀ ခုနှစ်မှစပြီး၊ ကလေးသူငယ် လက်ထပ်ပွဲ အစဉ်အလာများ စတင် လာခဲ့ပြန်ပါသည်။ ဟိန္ဒူအယူဝါဒအရ၊ မယားပြိုင် ယူသော ဓလေ့က
ရှေးရိုး စွဲဖြစ်နေပြီး၊ မိန်းမပျို တစ်ယောက်က လက် မထပ်ခင် ချစ်ကြိုး သွယ်မိခြင်းသည် ကြီးလေးသောပြစ် မှုကို ကျူးလွန်သည်ဟု ပညတ်ထားပါသည်။
သတို့ သား မိဘက ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသူ၏ အကူအညီဖြင့် သတို့ သမီး၏ မိဘကို ချဉ်းကပ်လေ့ ရှိပြီး၊ သတို့ သားမိသားစုဂုဏ်ဒြပ်၊ ပညာတတ်မှုကို အကဲခတ်ပြီးနောက်၊ သတို့ သမီးဘက်က လက်ခံ ဆုံးဖြတ် ပါသည်။ သတို့ သမီးဘက်က သတို့ သား ကို ရွှေစ၊ငွေစ ပေး၍တင်တောင်းရ သည့်ပြင်၊ မင်္ဂလာဧည့်ခံ စရိတ်ကိုပါ တာဝန်ယူပေးရပြန်ပါသည်။ ယနေ့ မျက်မှောက်ကာလ မှာတော့ မင်္ဂလာ လက်ဖွဲ့ တင်တောင်း ရသည့်ပမာဏနှင့် သတို့ သမီး ပညတ်ချက်များ ကို ရှေးယခင်ကေ လာက်ပုံကြီးမချဲ့ ကြသော်လဲဘဲ၊ အစဉ် အလာကတော့ ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။
မင်္ဂလာပွဲများ တွင် များသောအားဖြင့် သတို့ သားက အဖြူရောင် ၀တ်လေ့ရှိပြီး၊ သတို့သမီးက အနီရင့် (သို့ မဟုတ်) ကြက်သွေးရောင် (သို့ မဟုတ်) ရွှေရောင်တောက်တောက်ကို ဆင်မြန်းေ လ့ရှိပါသည်။ မင်္ဂလာ အစားအစာများကို ကျွန်းကျင်စားဖိုမှူးများကိုသာ ချက်စေပြီး၊ ရက်ရက်ရောရော အကုန် အကျ ခံကျွေးမွေးလေ့ ရှိပါသည်။သက်သက်လွတ်(သို့ မဟုတ်)အသားပြွမ်းထားသောနှုတ်မြိန် စာများကို မင်္ဂလာ ထမင်းမတိုင်ခင် ဧည့်ခံလေ့ရှိပါသည်။ ရှေးယခင်ကာလများက အဖျော်ယမကာ တို့ ကို ပစ်ညက် ထားသော် လဲ၊ ကာလရွေ့ လျားလာပြီး၊ ယခုအခါ အချိုရည်၊ mocktails ၊ ၀ိုင်၊ ၀ီစကီ တို့ ကိုပါ အလျှံပါယ်တည်ခင်း ထားပါသည်။
အဓိက ဟင်းလျာအဖြစ် ပုံစံအမျိုးမျိုး ချက်ပြုတ်ထားသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဟင်းလျာ (၅) မျိုး၊ အဆီအနှစ် များသော အသား ဟင်းလျာများ၊ ပေါင်မုန့် ဖြင့်တွဲဖက်စားရသော အိန္ဒိယရိုးရာ daals နှင့် pulao ဟင်းလျာ များ၊ အသုပ်စုံများ၊ အချိုပွဲအဖြစ် ရိုးရာ မုန့် ချိုများ အပြင် ရေခဲမုန့်နှင့် လ္ဘက်ရည် ကလည်း မပါလျှင်မပြီးပါ။ အစာပိတ်အဖြစ်၊ Paan (သို့မဟုတ်) Vida ဟုအမည်ရသော ကွမ်းယာ ချိုမွှေးကိုပါ တည်ခင်းပေးခြင်းက ချစ်စရာ့ဓလေ့တမျိုးပါ။
မကောင်းသောဂြိုလ်ဆိုးများ ပပျောက်စေရန်အတွက် သတို့ သား ၏ မိခင်က ပန်းပွင့့််ချပ်/ပွင့်ဖတ် တို့ ကို မင်္ဂလာမောင် နှံ၏ ဦးခေါင်းပေါ်မှကျဲချပေးကာ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကို အဆုံးသတ် လေ့ ရှိကြပါသည်။
နှာခေါင်းထိပ်က အမည်းစက်တွေကို ရိုးရင်းလွယ်ကူစွာ ဖယ်ရှားနည်း
မျက်နှာ အဆီပြန် တတ်သူများနှင့် ပေါင်းစပ် အသားအရေ (ခေါ်)နှဖူးအလယ် နှာခေါင်း မေးစေ့ တွေ မှာ အဆီပြန်တတ် သူများဟာ အမည်းစက်များ ထွက်လေ့ ရှိပါတယ်။ အမည်းစက် လို့ဆိုပေမယ့် တကယ် တမ်းမှာတော့ ၀က်ခြံဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းကို ညှစ်လိုက်တဲ့ အခါ အထဲက အဖြူရောင် အဆံလေးတွေ ထွက် လာ တာမျိုးပါ။ ထိုအမည်းစက်တွေကို နှာခေါင်းထိပ် တ၀ိုက်မှာ အများဆုံးတွေ့ ရပြီး၊ နှာခေါင်းဘေး ကပ်လျက် ရှိသော ပါးပေါ် မှာ လည်း တွေ့ ရ တတ်ပါတယ်။ အောက်နှုတ်ခမ်း နဲ့ နီး ကပ်နေသော မေးစေ့ပေါ်မှာတော့ ကြာစူးကဲ့သို့အဖု ချွန်းချွန်းလေးတွေ ခပ်ကျဲကျဲ ထွက်ပြီး၊ ၄င်းကို ကုတ်ခြစ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာလည်း အဖြူရောင် အဆံထွက်ရှိလာ ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပို၍အဖြစ်များပြီး၊ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် ကစလို့ခုလိုမျိုး ထွက်လာကြ တာပါ။ သာမန်ဝက်ခြံဖုတွေဟာ အချိန်တန်လို့သူ့ အလိုလို မှည့်သွားတဲ့အခါ အဖြူရောင်အဆံ သွေးစ သွေးနနှင့် သားနံ(သားငံ) ရည်တွေ ထွက်လာပေ မယ့်၊ အမည်းစက်တွေကတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ ကြောင့် ၄င်းအမည်းစက်တွေကို အထဲက အဆံ ထွက်လာဖို့ညှစ်ပေးရမှာပါ။ တချို့သူများက ညှစ်လိုက်ရင် ပွားတတ် တယ်ဆိုကာ မညှစ်ရဲဘဲ ထားကြပါ တယ်။ တကယ်တမ်းမှာ တော့ အမည်းစက်တွေက မပွားတတ်ပါဘူး သို့သော် အမြစ်ပြတ်တယ်လို့ မရှိဘဲ၊ အဆံများထွက်သွားပြီးနောက် ရက်အနည်း ငယ်အတွင်းမှာပင် နေရောဟောင်းမှာ သူ့ အလိုလို ပြန်ပေါ် လာလေ့ရှိပါတယ်။ အလှကုန်ဈေး ကွက်ထဲမှာ နှာခေါင်းကပ်(ကပ်ခွာ)ပစ္စည်းလေးတွေ၊ အမည်းစက်အတွက် သီးခြားဖန်တီးထား တဲ့ scrub (ခေါ်) ဂျီး (ချေး)တွန်း သန့် စင်ပစ္စည်းလေးတွေ ရနိုင်သလို၊ အလှပြင်ဆိုင်တွေ မှာလည်း မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေ ကိုဆေးသုံး၍ ဖယ်ရှားပေးနေပါတယ်။ အလှပြင်ဆိုင်သို့တကူးတက သွားနေစရာမလိုဘဲ မိမိအိမ်မှာပင် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေး တွေသုံးပြီး ဘေးဥပါသ် မဖြစ်စေဘဲ အမည်းစက်တွေကို ဖယ်ရှားလို့ ရပါတယ်။ သို့ သော် သန့်ရှင်းမှုနှင့်အတူ ဇွဲရှိဖို့ တော့ လိုပါ တယ်။ ဦးစွာ ညအိပ်ယာဝင် ခါနီး မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် အမဲစက်တွေကို လက်သန့် သန့်ဖြင့်ညှစ်ထုတ်ပါ (၀က်ခြံညှစ်ကိရိယာကို သုံး နိုင်သော်လည်း၊ နောင်တကြိမ်ပြန်သုံးဖို့ အတွက် ထိုကိရိယာကို သန့် ရှင်း စင်ကြယ်နေပါစေ) ပြီးရင် Foaming Cleanser ပါတဲ့ Oil Free (ခေါ်) အဆီပြန်သူများအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်တားသော မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ ဖြင့်စင်ကြယ်အောင် ထပ်မံ၍ မျက် နှာသစ်ပြီးနောက် မိမိ အဆင်ပြေရာ အောက်ပါ နည်းတစ်ခုခုကို သုံးပါ။
(၁) ခရမ်းချဉ်သီးကို အလယ်ကထက်ခြမ်းခြမ်း၊ အစေ့ထုတ်၍ ထိုခရမ်းချဉ်သီး အသားနှင့် နှာခေါင်းထိပ်ကို ပွတ်ပေးပါ။ မိနစ် ၂၀ ခန့် အကြာမှာ ရေအေးဖြင့် မျက်နှာသစ်ပေးပါ (ရေခဲရေ မဟုတ်ပါ)
(၂) နှာခေါင်းထိပ်ပိုင်း၊ မေးစေ့ နှင့် နှာတံဘေးမှ ပါး ၂ နှစ်ဖက်ပေါ်သို့ရှားစောင်းလက်ပပ် ဂျယ်လီ (အနှစ်သား)ဖြင့် လိမ်းပွတ် ပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်ခန့် အကြာ မျက်နှာကို ရေအေးဖြင့်သန့် စင်ပေးပါ (ရေခဲရေ မဟုတ်ပါ)
(၃) နှင်းဆီရည်ဖြင့် မျက်နှာသစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Rose Water(ခေါ်)နှင်းဆီရည်ကို အလှကုန် ပစ္စည်း ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင် ပါတယ်။
(၄) ဆားရည် မပျစ်မကျဲဖျော်၍ အမည်းစက်များပေါ်ကိုသာ လိမ်းပွတ်ပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်ခန့် အကြာ မျက်နှာ ကို ရေအေးဖြင့်သန့်စင်ပေးပါ၊ ဒီနည်းက အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်အသေတွေကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ (ရေခဲရေ မသုံးရ)
(၅) ပုဝါသန့် သန့် ကို ရေနွေးဖြူစိမ်ကာ အရည်ညှစ်၍ ထိုအမဲစက်တွေပေါ် ခေတ္တ အုပ်ထားပေးပါ။ ဒီနည်းက ချွေးပေါက်ပွင့်ကျယ် လာပြီးတော့ အမည်းစက်တွေကို အလွယ်တကူ ညှစ်ထုတ်လို့ ရပါတယ်။ (အရမ်းပူသော ရေနွေးကို မဆိုလိုပါ)
(၆) သံပုရာရည် နဲ့သစ်ကြပိုးခေါက်မှုန့် တို့ ကို ဆတူရောပြီး ညအိပ်ယာဝင်ခါနီး အမည်းစက်တွေပေါ် လိမ်းပါ။ တညလုံးလိမ်း အိပ်ပြီးနောက် နံက်အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(က) အထက်ဖော်ပြပါ မည်သည့်နည်းကိုဘဲ သုံးသုံး၊ လက်ကို စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပြီးမှသာ မျက်နှာကို ကိုင်တွယ်ရမှာပါ။ (ခ) အမည်းစက်တွေကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကုတ်ဖဲ့ခြစ် ထုတ်ခြင်း မပြုရ၊ မျက်နှာ အသားအရေ ဒဏ်ရာဖြစ်သွားနိုင်လို့ ပါ။ (ဂ) အမည်းစက်တွေ ညှစ်ပြီးနောက် မိတ်ကပ်၊ ကရင်ပပ်ဖ်တွေ
ချက်ချင်း မလိမ်းသင့်ပါဘူး၊ အလှပြင် ပစ္စည်းတွေမှာပါတဲ့ အဆီဓာတ်တွေ ၀က်ခြံပေါက်ထဲကို စိမ့်ဝင်ရောက် သွားပြီး ပြည်တည် ၀က်ခြံဖြစ် သွားနိုင်သလို၊ နောက်ထပ် အဆံပြည့် အမည်းစက် များလည်း ချက်ချင်းဆို သလို ပြန်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ (ဃ) တနေ့ တာလုံး လိမ်းကျံထားတဲ့ မိတ်ကပ် နဲ့ အလှအပတွေကို ကုန်စင်အောင် ဆေး ကြောသန့် စင်ဖို့ ကတော့ သင့်ရဲ့ သမိုင်းပေး တာဝန်ဘဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ (င) ဆိုးဆိုး ရွားရွား အမည်းစက် ထွက်သူများ အနေဖြင့်၊ အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာ scrub ချေးချွတ်ခြင်းကို ၁-လ ၁-ကြိမ် မှန်မှန်လုပ်ပေးဖို့ လိုပါပြီ်။
အလှအပမြတ်နိုးသူတိုင်း လှသထက်ပို၍ လှနိုင်ကြပါစေရှင်။
Saturday, November 22, 2014 စားသောက်ဖွယ်ရာ
ပဲကြီးကို ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ရောချက် ထားတာပါ။ ထမင်းမြိန်စေတဲ့ ဟင်းရံ တမျိုးပါ။ ချက်ရလည်း လွယ်တာမို့ ခုပဲ တူတူ ချက်ကြည့် ရအောင်…
ပဲကြီး – ၂၀၀ ဂရမ် (အခွံနွှာထားပေးပါ)
ခရမ်းချဉ်သီး – ၁လုံး (အစေ့ထုတ်ပြီ ပါးပါးလှီးပါ)
ဆနွင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၂ပုံ
ဂီ(သို့) ထောပတ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
နံနံပင် – အနည်းငယ် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
၁။ အရင်ဆုံး ပဲကြီးကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီ အခွံနွှာထားပေးပါ။
၂။ ပြီနောက် ဒယ်ထဲ ဂီ (သို့) ထောပတ် အပူပေးပြီ ပူလာလျှင် ကြက်သွန်နီ ဆီပူထိုးပေးပါ။
၃။ ပြီလျှင် ဆနွင်းမှုန့် ထည့်ကာ မိနစ်ဝက်ခန့်ေ၇ာမွှေပေးပါ။
၄။ ထို့နောက် ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပဲကြီး၊ ရေ(၂၀၀မီလီလီတာ)၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် ထည့်ကာ အဖုံးအုပ်ပြီ ပဲကြီး နူသည်အထိ တည်ထားပေးပါ။ (ရေလိုလျှင် ထပ်ထည့်ပေးပါ)
၅။ ဆီပြန်လာလျှင် နံနံပင် အုပ်ပြီ အရသာရှိသော ပဲကြီးနှပ်ကို သုံးဆောင်လို့ ရပါပြီ…
ချုံကြားမှ ဘုံဖျားသို့
ဘ၀ကို မည်မျှ နိမ့်ပါးနုံချာသော အခြေအနေမျိုးမှ စတင် ခဲ့ရသည် ဖြစ်ပါစေ၊ ရည်မှန်းချက် ရှိမည်၊ ဥာဏ် အမြော်အမြင် ရှိမည်၊ မလျှော့သော ဇွဲလုံ့လ ရှိမည်ဆိုက သည်တစ်သက်တာ ဘ၀အပြီးသတ် ချိန်၌ အမြင့်မားဆုံး ထိပ်ဆုံးနေရာကို ရရှိနိုင်ပါ သည်။
သည်လို ရရှိသွားခဲ့ သူတွေလည်း သမိုင်း တစ်လျှောက် အမြောက်အမြား ရှိသည်။ အထွတ် အထိပ်သို့ ရောက်ရှိ ကြသူတွေ၏ အတ္ထုပ္ပတိများကို လှန်လှောကြည့်လျှင် “ ချူံကြားမှ ဘုံဖျားသို့ ” တက်လာနိုင်ခဲ့သူတွေ များပြားလှကြောင်း တွေ့ရှိရလိမ့်မည်။
သည်လို တက်လာနိုင်ခွင့်သည် ပါရမီထူးသူ တချို့သာ ရရှိနိုင်သည့် မဟာအခွင့်အရေး မဟုတ်။ ဘုံဖျားသို့ တက်သော လှေကားသည် အထူးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် သီးသန့် ကန်သတ်ထားသည့် လှေကားမဟုတ်။ လူတိုင်းတက်နိုင်သည့် လှေကား၊ လူတိုင်းအတွက် ဖွင့်ထားသည့် အခွင့်အရေး တံခါးသာ ဖြစ်သည်။
သင်သည် စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် အောင်မြင် ကြီးပွားချင်သလား၊ အနုပညာသမားအဖြစ် ထင်ပေါ်ကျော် ကြားချင်သလား၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင် လွှမ်းမိုး တွင်ကျယ်ချင်သလား၊ ထူးခြားပြောင်မြောက်သော နိုင်ငံရေး သမားတစ်ယောက်အဖြစ် အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ချင်ပါသလား။
ဘယ်အရာမဆို ဖြစ်လာနိုင်ခွင့် သင့်မှာ ရှိနေသည်။
အရေးကြီးသည်က အထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့် ရည်မှန်းချက်၊ ဥာဏ်အမြော်အမြင်နှင့် ဇွဲလုံ့လ ဖြစ်သည်။
ရှေးဦးစွာ သင့်ကိုယ်သင် သာမန်ဘ၀နှင့် မတင်းတိမ်နိုင်သောဆန္ဒ ရှိရမည်။ ပီပြင်ပြောင်မြောက်သော ဘ၀တစ်ခု တည်ဆောက်မည်ဟူသော ရည်မှန်းချက် ရှိရမည်။
ဒုတိယ၊ ထိုသို့သော ဘ၀တစ်ခု အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်သွား စရာ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ စနစ်တကျ ချမှတ်တတ်ရမည်။
တတိယ၊ အမြော်အမြင် ရှိစွာ ချမှတ်ထားသည့် ယင်းလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲလုံ့လဖြင့် ရေရှည်စွဲမြဲစွာ အကောင်အထည်ဖော်ရဲရမည်။
သည်အတိုင်း လုပ်နိုင်လျှင် သင်လည်း “ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ” တစ်ယောက် မုချ ဖြစ်လာရလိမ့်မည်။
သားသား မီးမီးကြီးရင် ဘာလုပ်မယ်
တနေ့က ကျမ မိတ်ဆွေ တယောက် အိမ်ကို အလည်ရောက် ပါတယ်။ သူနဲ့ အတူ သူ့ရဲ့ သမီးလေးလည်း ပါပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သမီးလေးက အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ်လောက်ပါ။ မိတ်ဆွေက သူ့ရဲ့ သမီးကလေး အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။
သမီးလေးက မူကြိုကျောင်းကို မတက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အကြောင်း၊ မူကြို ထားတုန်းက တရက်ပဲ တက်ပြီးတော့ ငိုပြီး ပြန်လာ တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ ပြီးတော့ ကလေးက “အမေတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆရာဝန် ကြီး ဖြစ်အောင် လို့ ကျောင်းနေရင် သမီး စာကြိုးစား ပါ့မယ်၊ မူကြိုတော့ မထားပါနဲ့” လို့ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်း၊ သူ့သမီး ဆရာဝန်မကြီး ဖြစ်လာအောင်လို့ ဘယ်လို ဘယ်လိုတွေ ကလေး ကို တွန်းအား ပေးပြီးတော့ စာကျက် ခိုင်းတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ အတန်းထဲမှာ သူ့သမီးက အမြဲပဲ ပထမ နေရာက မဆင်းဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း စသဖြင့် ကျမကို ပြောပြ ပါတယ်။
သူ့စကားကို ကျမနားထောင်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျမက ကလေးကို သမီးက ဆရာဝန် ဖြစ်ချင်တာလား ဆိုတော့ ကလေးက ခေါင်းငြိမ့်ပြ ပါတယ်။ သမီးက ကျန်တာရော ဘာတွေ ၀ါသနာ ပါသေးလဲလို့ ကျမက ကလေးကို ထပ်မေးတဲ့ အခါမှာတော့ ကလေးက ကျမမေးခွန်းကို ဘာမေးမှန်း မသိရှာပါဘူး။ မျက်လုံးလေး ပြူးပြီးတော့ ကြည့်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျမက ထပ်မေးပါတယ်။
“သမီးက ဘာဝါသနာပါသေးလဲ လို့ အန်တီက မေးတာပါ။ ဥပမာ- စာအုပ်ဖတ်တာ၊ ပုံဆွဲတာ၊ သီချင်းဆိုတာ စသဖြင့် ပေါ့” လို့ ကျမက ပြောလိုက်ရော ကလေးမလေး ရဲ့ မျက်နှာက ပိုပြီးတော့ စိတ်ရှုတ်ထွေး သွား ပုံ ပေါ်လာပါတော့ တယ်။ ပြီးတော့ အသံ တိုးတိုးလေးနဲ့ “သမီးက ကြီးရင် ဆရာဝန်မကြီး ဖြစ်အောင် လို့ စာတွေ အများကြီး ကျက်နေတာ ပါ” လို့ ပြန်ဖြေ ပါတယ်။
သူ့ အမေကတော့ သူ့သမီးရဲ့ အဖြေကို အင်မတန်မှ သဘောကျတဲ့ ဟန်နဲ့ တပြုံးပြုံး ဖြစ်နေပေမယ့် ကျမ ကတော့ မပြုံးနိုင်တော့ ပါဘူး။ ကလေးရဲ့ အနာဂတ် အတွက် တော်တော်လေးကိုမှ စိတ်ထဲ မောမိ တာ ဖြစ်သလို ဒီကလေးလို တခြား ကလေးမျိုးတွေ အတွက်လည်း ရင်မောသွားပါတော့တယ်။ ဆရာဝန် ဖြစ်အောင်လို့ စာတွေ အများကြီး ကျက်နေတယ် ဆိုတဲ့ စကားဟာ ရုတ်တရက် ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ဖြင့် ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူဖွယ် ကောင်းတဲ့ စကားပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီ စာတွေ အများကြီး ကျက်နေတယ် ဆိုတဲ့ နောက်မှာ ကလေးတယောက် (လူတယောက် ) အတွက် လိုအပ်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်း ဖွံ့ဖြိုးမှု စွမ်းရည်၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု စွမ်းရည်၊ တွေးခေါ်မှု စွမ်းရည်၊ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးမှု စွမ်းရည် စတဲ့ စွမ်းရည်တွေ တခုမှ မပါလာတော့ ပါဘူး။ မိဘတွေကလည်း ကိုယ့်ကလေး ဘက်စုံစွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ မသိမြင်မိကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ “သမီး ကြီးရင် ဆရာဝန်မကြီး ဖြစ်အောင်လုပ်နော်” ဆိုတဲ့ စကားက အခုမှ ခေတ်စားတဲ့ စကား မဟုတ် ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း သုံးလေးဆယ်လောက် ကတည်းက ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ အင်မတန် ခေတ် စားခဲ့တဲ့ စကားပါ။ ဆရာဝန်လိုင်း ၊ အင်ဂျင်နီယာလိုင်း ဆိုတာတွေကို ဆယ်တန်း ရမှတ် အလိုက် အနည်း အများ စခွဲကတည်းကိုက ခေတ်စား လာခဲ့တဲ့ စကားပါပဲ။
ဒီလိုင်းတွေက အမှတ်များဆုံး ရတဲ့သူတွေသာ တက်ခွင့်ရတာမို့ ဒီလိုင်းတွေကို ရတဲ့ သူတွေက လူတော်တွေ လို့ ယေဘူယျ အားဖြင့် ခေါ်လို့ရပါတယ်။ တခြားဘာသာရပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ၀ိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ ဘာသာရပ်များ ကိုတော့ မိဘများက အားမပေးကြ သလို၊ ကျောင်းသားများ ကလည်း အမှတ်မီတဲ့ ဘာသာရပ်တွဲကိုသာ ယူလိုက်ရ တာမို့လို့ ဘာသာရပ် အပေါ်မှာ အထင်ကြီးစိတ်နဲ့ စိတ်ဝင်စားစိတ် နည်းကြပါတယ်။
ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာက ငယ်စဉ် ကတည်းက ၀ိဇ္ဇာဘာသာတွဲ၊ သိပ္ပံဘာသာတွဲ များကို ကလေးတို့ စိတ်ဝင် စား လာအောင်လို့ အခြေခံပညာ ကျောင်းများက သင်ကြား မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကျက် ဒါဖြေ ပညာရေး စနစ်အောက်မှာ ကလေးတို့ဟာ ကျက်ပြီးသာ ဖြေနေရတာမို့လို့ ဘာသာရပ်တွေ ကိုသင်ကြားတဲ့ အခါမှာ ကလေးတို့ ရင်ထဲက စူးစမ်းလို စိတ်၊ သိချင်စိတ်တွေကို ပညာရေးက နှိုးဆွ မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ သမီးကတော့ သမိုင်းဘာသာကို ၀ါသနာပါတယ်။ သင်္ချာ ၀ါသနာပါတယ် ။ သင်္ချာတို့ သမိုင်းတို့ ၀ါသနာပါတာမို့လို့ ကြီးရင် ဒီဘာသာ တွဲတွေ အကြောင်းကို ခြေခြေမြစ်မြစ် သိအောင် လို့ ဆက်လေ့လာမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးမျိုးကို ကျောင်းသား အများစု ဆီမှာ မရှိကြတာ များပါတယ်။
ဘာသာရပ် တခုခု ပေါ်မှာ ထူးထူးခြားခြား ၀ါသနာပါတဲ့ ကလေးမျိုးတွေ ကျပြန်တော့လည်း မိသားစု အသိုင်းဝိုင်းရဲ့ အားမပေးမှု၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းများရဲ့ စာတွေ့၊ လက်တွေ့ ပြည့်စုံ လုံလောက်အောင် သင်မပေးနိုင်မှု၊ စာအုပ်စာတမ်း ရှားပါးမှုတို့ အောက်မှာ စိတ်ကူးတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ ပျောက်သွား ရပြန်ပါ တော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ၀ိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ ဘာသာ ရပ်များဟာ ဘွဲ့တဘွဲ့ မြန်မြန်ရအောင်လို့ တက်ရတဲ့ နာမည်တပ် ဘာသာရပ်များသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်း ကတော့ ကျမအပါဝင် ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဟာလည်း ဒါကျက်ဒါဖြေ အခြေခံ ပညာရေး နဲ့ပဲ ကြီးပြင်း ခဲ့ရတာမို့လို့ ကျောင်းသင်ခန်းစာ ဘာသာရပ်များပေါ်မှာ အခုခေတ်ကလေးများ လိုပဲ စိတ် မ၀င်စားခဲ့ကြ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တခြား အပြင်ဝါသနာများ ဖြစ်တဲ့ စာဖတ်တာ၊ ပုံဆွဲတာ၊ တူရိယာ တီးခတ်တာ၊ ဘောလုံးကန်တာ၊ စစ်တုရင်ထိုးတာ စတဲ့ အရာများကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လုပ်ဖို့ ၀ါသနာပါကြ ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုံးက နည်းပညာလည်း သိပ်မထွန်းကား သေးတဲ့ အချိန်မို့လို့ ကစားစရာ အီလက်ထရောနစ် ဂိမ်းမျိုးစုံလည်း မပေါ်သေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကျူရှင်ဆိုတာလည်း အခုခေတ် ကလေးတွေလိုမျိုး ကျောင်းကျူရှင်၊ အပြင်ကျူရှင် စတာတွေကို အလုယက် တတ်နေရတာ မဟုတ်သလို၊ အစိုးရစစ် မဟုတ်တဲ့ ကျောင်းအတန်းတွေမှာ ကျူရှင်တတ်စရာ မလိုတာမို့လို့ ကျမတို့ မတတ်ခဲ့ ရပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကျမတို့ဟာ အားလပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ကိုယ် ဘာကို စိတ်ဝင်စားသလဲ၊ ဘာလုပ် ချင်သလဲ ဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာကို ပြန်စူးစမ်းနိုင်တဲ့ အခွင့်ရေး ရခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ရင်းနဲ့ စာဖတ်ဝါသနာ ပါခဲ့ကြတယ်။ ပုံလေးတွေကို ဆွဲရင်းနဲ့ ပုံဆွဲဝါသနာ ပါခဲ့ကြတယ်။ စစ်တုရင် ထိုးရင်းနဲ့ စစ်တုရင် ၀ါသနာ ပါခဲ့ကြတယ်။
ဒီဝါသနာများဟာ တကယ်တော့ တလွဲပညာရေးကြောင့် ညှိုးခြောက်နေတဲ့ ကလေးတို့ရဲ့ စိတ်သစ်ပင် ကို ရေအေးအေး အားဆေး လောင်းပေးလိုက်သလို ပါပဲ။ ကျမတို့ရဲ့ ကျက်ဖြေ ပညာရေး ကြီးကြောင့် တွေးခေါ်မှု ဉာဏ်ရည် နိမ့်ပါးစ ပြုလာတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို ပြန်ရှင်သန် လာစေခဲ့ ပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ စာတွေ ဖတ်ရင်း၊ ပုံတွေ ဆွဲရင်း၊နဲ့ တွေးတတ်လာတယ်၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်း နဲ့ တီထွင်မှု စွမ်းရည်တွေ ထက်မြတ်လာခဲ့ ပါတယ်။ မှန်တာနဲ့ မှားတာ၊ တရားတာနဲ့ မတရားတာ ကို သိမြင်လာခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ပညာရေးက ကျမတို့ ဦးနှောက်တွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့ ဖျက်စီးခဲ့၊ ကျမတို့ဟာ ကောင်း မွန်တဲ့ ၀ါသနာ နဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို မပျက်စီးအောင်လို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အခု ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ကလေးတို့ ဆော့ကစားစရာ အီလက်ထရောနစ် ဂိမ်းတွေ များစွာပေါ်လာ သလို၊ ကလေးများဟာ မူလတန်းအရွယ်လောက်မှာ ကတည်းကိုက ကျူရှင်ရယ်၊ကျောင်းရယ်၊ ကျုရှင်က ပေးတဲ့ အိမ်စာ၊ ကျောင်းကပေးတဲ့ အိမ်စာရယ် ဒါတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ကြရ ပါတော့တယ်။ အပြင်စာ ဖတ်ဖို့၊ ဆေးရောင်စုံနဲ့ ပန်းချီတွေ ဆွဲဖို့ စတဲ့ အရာလေးတွေကို လုပ်ဖို့ အတွက် ကလေး တော်တော် များများမှာ ကိုယ်ပိုင် အားလပ်ချိန်ရယ်လို့ မရှိတော့ ပါဘူး။ ဒီလို ကလေးတွေ အတွက် အားလပ်ချိန် မရှိခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်က ကိုယ်တိုင် ဘာကို ၀ါသနာပါမှန်း၊ ဘာကို လုပ်ချင်မှန်း မသိတော့တဲ့ အပြင် ဘယ်လို အရာကို စိတ်ဝင်စားသလဲ ဆိုတာ မသိတဲ့ လူကြီးများ ဖြစ်လာကြတော့ တာပါပဲ။
စာဖတ်ဖို့၊ တွေးတော စဉ်းစားဖို့၊ တီထွင် ဖန်တီးဖို့၊ ကိုယ်လက် အားကစားလှုပ်ရှားဖို့ ၀ါသနာ မပါလာတဲ့ (ကလေးများ ဟာ ) တချိန်မှာ လူကြီးတွေ ဖြစ်လာကြတဲ့ အခါ သူတို့ ဟာ ဆရာဝန်ပဲ ဖြစ်လာဖြစ်လာ၊ အင်ဂျင်နီယာပဲ ဖြစ်လာ ဖြစ်လာ ၊ ကျောင်းဆရာပဲ ဖြစ်လာ ဖြစ်လာ သူ့ကိုယ်သူ အတွက်ရော၊ လူ့အဖွဲ့စည်း အတွက်ပါ အန္တရာယ် ရှိလာပါပြီ။
စာမဖတ်တဲ့၊ တွေးခေါ်ဝေဖန် မစဉ်းစားတတ်တဲ့၊ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ ရုပ်ကျန်းမာရေး မပြည့်စုံတဲ့ ကျောင်း ဆရာတွေ လက်ထဲ၊ ဆရာဝန်တွေ လက်ထဲ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ လက်ထဲမှာ အသက်များစွာ၊ ဘ၀များစွာ ကို ပေးထားရတာမို့လို့ နောက်ထပ် နောက်ထပ် မျိုးဆက်များ အတွက်လည်း အန္တရာယ်ပါပဲ။
ဒီအန္တရာယ်ကြီးကို ကျမတို့ တားဆီးဖို့ လိုပါပြီ။ ကလေးတို့ကို ဆရာဝန် ဖြစ်အောင်လို့ စာတွေ အကျက် ခိုင်းတာ၊ အမှတ်တွေ အများကြီး ရအောင်လို့ ကျောင်းစာကျက်၊ ကျူရှင်စာကျက်၊ ဂိုက်နဲ့ စာကျက် စတာတွေ ကို မအားလပ် အောင် လုပ်ခိုင်း နေကြတာတွေဟာ တကယ်တော့ ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို ဖျက်ဆီး ပစ် နေတာပါပဲ။
ကလေး တယောက်ချင်းစီဟာ အနာဂတ်နိုင်ငံတော် အတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့ လူကြီးတွေ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် ဒါကျက်ဒါဖြေ စာမေးပွဲကြီး အတွက် ကလေးတို့ကို စာလည်း ကျက်ခိုင်းသလို၊ ကလေး တို့ရဲ့ ဦးနှောက် အတွက် အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများ ဖြစ်တဲ့ အပြင်စာ ဖတ်ခိုင်းတာ၊ တူရိယာ ပစ္စည်းတခုခုကို တီးမှုတ် နားထောင်တာ၊ ပုံဆွဲတာ၊ ရေကူးတာ၊ အားကစား လေ့ကျင့်တာ စတဲ့ အလုပ်များ ကိုလည်း ကလေးတို့ ၀ါသနာလေး ပါလာဖို့ အတွက် အလေ့ကျင့်လေး ရအောင်လို့ လုပ်ခိုင်းပါဦး လို့ မိဘ များကို အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ။
The post သားသား မီးမီးကြီးရင် ဘာလုပ်မယ် appeared first on ဧရာဝတီ.
ဆယ်ကျော်သက် မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ အထွေထွေ
ဓာတ်ပုံ – tpe.madmag2.com
ဆယ်ကျော်သက်၊ မြီးကောင်ပေါက်၊ လူငယ် ဆိုတာကို အမျိုးမျိုး အမည်တပ် ခေါ်ဝေါ်ကြပေမယ့် လူကြီး မဖြစ်သေးမီနဲ့ ကလေးဘဝ ကျော်လွန် လာခါစ အရွယ်ဆိုတာတော့ ယေဘုယျ သတ်မှတ် ထားကြတာပါ။
ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့ ဆယ်ကျော် သက်၊ မြီးကောင်ပေါက် (Adolescents) ဆိုတာ ကို ၁၀ နှစ် ကနေ ၁၉ နှစ်အရွယ် လူငယ်တွေ လို့သတ်မှတ် ပါတယ်။ လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဲဒီအရွယ် ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံလောက် ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ လူဦးရေရဲ့ ၅ ပုံ ၁ ပုံ ရှိနေကာ အရေအတွက်က ပိုပိုတိုးလာနေတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်၊ မြီးကောင်ပေါက် လူငယ် ဘဝဆိုတာက ကလေးသူငယ် အဖြစ်ကနေ လူကြီးဆိုတဲ့ ဘဝကို သွားနေတဲ့ ခရီးတခုပါပဲ။ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းနဲ့ ခံစားမှုပိုင်းတွေ အားလုံးလည်း ပြောင်းလဲ သက်ဝင်စ အရွယ်ပေါ့။
ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားလာသလို စိတ်ထဲမှာလည်း စူးစမ်းလိုစိတ်တွေ၊ မေးခွန်းတွေ စတင်လာကြတဲ့ အရွယ်ပေါ့။ လွတ်လပ်စွာ နေလိုတဲ့ စိတ်တွေလည်း စတင်လာ ကြပြီပေါ့။ ဒီအရွယ်မှာ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ အတူ သူတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်လိုခြင်းတွေ အတွက် သင်ယူဖို့ရာ အထောက်အကူ နည်းမှန်လမ်းမှန်တွေ လိုအပ်တာတော့ အသေအချာပါပဲ။
ဆယ်ကျော်သက်၊ မြီးကောင်ပေါက် ဆိုတာက ကလေး မဟုတ်တော့ပေမယ့် လူကြီးလည်း မဖြစ်သေးဘူး ဆိုတာတော့ သတိပြုရမှာပါ။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြုအမူတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေကို မစဉ်းစားမိဘဲ စွန့်စား လုပ်ဆောင်တတ်ကြ တာလည်း သဘာဝပါ။ သူတို့အရွယ်တွေက ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တယ်၊ အသက် အန္တရာယ် နဲ့ ဝေးပါတယ်လို့ ကလေး သူငယ်တွေ၊ အိုမင်းမစွမ်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထင်မြင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးမှာ တနှစ်ကို ၁၀ နှစ်နဲ့ ၁၉ နှစ်အကြားအရွယ်တွေ ပျမ်းမျှ ၁ ဒသမ ၇ သန်းလောက် သေ ဆုံး နေကြရ ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကို ဆန်းစစ်တော့ မတော်တဆ ထိခိုက်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ရောဂါ စတဲ့ ကာကွယ်လို့ ရတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် ပါပဲ။
ဒါကလည်း ဒီအရွယ်တွေရဲ့ သဘာဝအရ ဆူညံအုံကြွတာတွေ၊ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ဖွယ် စွန့်စားခန်းတွေကို တပ်မက် ရူးမူးကြလို့ ဖြစ်သလို လောကကြီးမှာ အရာရာက ကိုယ်တွေးထင်ထားသလို၊ အိပ်မက်နေ သလိုပဲ ဖြစ်နေလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ်လုပ်သမျှ ဘယ်အရာကမှ ဟန့်တားလို့ မရဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေကြောင့် ပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့အရွယ်တွေမှာ ရှိတတ်၊ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ကိုတော့ သိထားသင့် ကြတာပေါ့။
တကယ်တော့ မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်တွေမှာ ကျား၊ မ မရွေး ကိုယ်ခန္ဓာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက မြန်ဆန် လွန်းနေတာ ကြောင့် သာမန်ထက်ပိုပြီး အာဟာရ ဓာတ်တွေ ဖြည့်တင်းရမှာပါ။ အာဟာရ လိုသလောက် မရရင်၊ အထူးသဖြင့် မိန်း ကလေးတွေမှာ ပျိုဖော်ဝင် နောက်ကျတာ၊ ဆီးခုံအရိုးကွင်း သေးငယ်တာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် ကာလ အာဟာရချို့တဲ့ရာက မိခင်ဖြစ်လာရင် ပေါင်မပြည့်တဲ့ ကလေး မွေးဖွားတာနဲ့ သွေးအားနည်းတာတွေက မလွဲ မသွေ ကြုံနိုင်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်ကာလ အမျိုးသမီးလေးတွေမှာ ဓမ္မတာ လာတာကလည်း စတင်နေပြီမို့ သံဓာတ်လို အာဟာရ ဖြည့်တင်းမှု ပိုလိုလာပါတယ်။ ဒါတွေကို သိနားလည်ဖို့ရာ ဆယ်ကျော်သက် ကာလတွေမှာ သဘာဝတရား အကြောင်း နဲ့ အာဟာရ လိုအပ်ချက်အကြောင်းတွေ ပံ့ပိုးအသိပေးဖို့၊ ဗဟုသုတ ပြောဆိုညွှ န်ပြပေးဖို့ အထောက်အကူတွေ လိုအပ်တာ အမှန်ပါပဲ။
မြီးကောင်ပေါက်တွေရဲ့ သဘာဝ အတိုင်း စိတ်အလိုလိုက်၊ မိုက်ရူးရဲဆန်မှုတွေ ကနေ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ မလိုအပ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာကြောင့် အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်စေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာ မျိုးက ဖွံ့ဖြိုးပြီးရော၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲရော နိုင်ငံ အားလုံးမှာ ကြုံတွေ့ရ များတဲ့ ပြဿနာ တခုပါပဲ။
မြို့ပြဆန်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ မြန်ဆန်လာတာ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာ မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံ ယိုယွင်းလာတာ၊ အင်တာနက်တွေ၊ မီဒီယာတွေ ကနေ အရွယ်မတိုင်မီ လိင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြားအမြင်တွေ တွေ့ထိ လာတာ တွေက ပြဿနာရဲ့ ရင်းမြစ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လိင်ပညာပေးမှုကို စနစ်တကျ မလုပ်ဆောင်နိုင်တာ ကလည်း အကြောင်းကြီး တခုပါပဲ။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် မိန်းကလေးတွေ ကိုယ်ဝန်လွယ်ရပြီ ဆိုရင် အရွယ်ရပြီး အမျိုးသမီး တွေထက် ၅ ဆ လောက် ပိုပြီး သေနှုန်းများတယ် ဆိုတာ တိကျတဲ့ သုတေသန တွေ့ရှိချက်တွေရဲ့ အဆိုပါပဲ။
မြီးကောင်ပေါက်တွေ လက်တည့်စမ်းတတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေက များသလို၊ အဲဒီ အကျိုးဆက် ဝေဒနာတွေ ကလည်း ဆယ်ကျော်သက်မှာ တွေ့ရတာပါပဲ။ အမူအကျင့်ဆိုးတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အစား အသောက်ကို ဖြစ်သလို စားတာ၊ အရက်သေစာနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ သုံးစွဲတာ၊ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တာ စတဲ့ အပြုအမူတွေရဲ့ ရလဒ်တွေက ဆယ်ကျော်သက် ကာလမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ဝေဒနာ အများစုပါပဲ။
မြီးကောင်ပေါက် လူငယ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှက ရူးသွပ်စွဲလမ်း နေတဲ့ အမူအကျင့်ဆိုးတွေ ပါပဲ။ ဒီအမူအကျင့်ဆိုးတွေ စတင်မိ တတ်တာကလည်း အတူတွဲ အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ ဖိအားကြောင့် အားနာ လိုက်လျောတာ၊ စမ်းပြီး သုံးကြည့်ချင်လို့ တခါတရံ လုပ်ကြည့် တာမျိုးတွေ ပါပဲ။
တွေ့ရအများဆုံး အမူအကျင့်ဆိုး ကတော့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အကျင့်ပါပဲ။ ပုံမှန် ဆေးလိပ် သောက်ဖြစ်နေ သူ အားလုံးနီးပါးက ဒီအလေ့အကျင့်ကို အသက် ၁၈ နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စတင်ခဲ့ကြတာ ချည်းပါပဲ။ အဲဒီ သူတွေပဲ ဆေးလိပ် သောက်တာကို ဆက်ပြီး အကျင့်ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ဆေးလိပ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ရောဂါ နဲ့ပဲ သေဆုံးကြတာပါပဲ။
သက်လတ်ပိုင်း၊ သက်ကြီးပိုင်းတွေမှာ အဆုတ်ကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါ၊ နာတာရှည် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ရောဂါတွေနဲ့ မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်ကတည်းက ဆေးလိပ် သောက်သုံးတာက အတိအကျ ဆက်စပ်နေတာကို သုတေသနတွေ အရ သိရပါတယ်။
ဆေးသုတေသန တွေက ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်လောက် ကျရင် ဆေးလိပ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါကြောင့် လူ ၁၀ သန်းလောက် သေဆုံးနိုင်ပြီး အဲဒီအထဲက ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ကတော့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေက ဖြစ်လိမ့် မယ်လို့ ခန့်မှန်းကြ ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်တွေ ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့ အထိရောက်ဆုံး တားမြစ်နည်းကို ကြံဆကြတော့ လည်း ၁၈ နှစ်အောက်တွေကို ဆေးလိပ်မသောက်ရ၊ ဆေးလိပ်မရောင်းရ ဆိုတဲ့ ဥပဒေတွေလောက်နဲ့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
စီးကရက်ကြော်ငြာတွေ တားမြစ်တာ၊ ဆေးလိပ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အခွန် အခတွေ တိုးမြှင့်တာ၊ ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်နဲ့ အားကစားကွင်းတွေမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ရ ဧရိယာအဖြစ် သတ်မှတ်တာတွေ ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်မှ ထိရောက်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
မြီးကောင်ပေါက် လူငယ်တွေမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ အများဆုံး ပြဿနာတခုကတော့ မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုတွေပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ယောက်ျား လေးတွေပေါ့။ မြို့ပြတွေမှာ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ ကားအန္တရာယ် အကြုံရ ဆုံး အရွယ်တွေပါပဲ။ ဆင်ခြင်တုံ တရား မပြည့်ဝသေးမီမှာ နမော်နမဲ့၊ ဆောင့်ကြွားကြွား ယာဉ်မောင်း တာတွေ၊ လမ်းမပေါ်မှာ ထီမထင်လုပ် တာတွေ ကနေ ဒီပြဿနာတွေ ဖြစ်ရတာပါ။
ယာဉ်စည်းကမ်းတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက သိနားလည်အောင် သင်ကြားပေးတာမျိုးနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ယာဉ်အန္တရာယ် လျော့ကျရေး အစီအစဉ်တွေ အများကြီး လုပ်ပေးနိုင်မှသာ ပြေလည်မယ့် ပြဿနာပါပဲ။
နောက်ပြဿနာ တခုကတော့ HIV/AIDS နဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာက ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ပေါ့။ လိင်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေက နှစ်စဉ် လူငယ် ၂၀ မှာ တယောက်နှုန်းတော့ ဖြစ်နေကြတယ် ဆိုပါတယ်။ HIV/AIDS ကတော့ ကမ္ဘာ တဝန်း ပျံ့နှံ့နေရာမှာ မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်တွေထဲက တနေ့ကို ၇၀ဝ၀ လောက်က ရောဂါကူးစက် ခံနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာတဝန်းမှာ ကလေးတွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေ လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ခံနေရတာကလည်း အကြောင်းတခု ပါပဲ။ မိန်းကလေးတွေ အသက် ၁၁ နှစ်နဲ့ ၁၆ နှစ်ကြားအရွယ်တွေက အန္တရာယ် အများ ဆုံးလို့ ဆိုပေမယ့် ယောက်ျား လေးတွေ လည်း အန္တရာယ် ရှိတာပါပဲ။ ကလေးသူငယ်နဲ့ ဆယ်ကျော် သက်တွေရဲ့ အခွင့်အရေး အတွက် ပြဋ္ဌာန်းထား တာတွေ ရှိပေမယ့် အန္တရာယ် ကြုံနေကြရတာပါပဲ။
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် အိုးအိမ်မဲ့တွေ၊ မြို့ကြီးတွေရဲ့ လမ်းဘေးနေ ဘဝတွေ၊ သဘာဝ ကပ်ဘေးကြောင့် ဒါမှ မဟုတ်၊ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့မှုကြောင့် အိမ်ခြေရာခြေ မဲ့သွားတဲ့ လူငယ်တွေဆို ပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့ အနေအထားကို တွေ့ရတာပါ ပဲ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လိင်ကဏ္ဍကို ကုန်သွယ်မှုတခုလို လုပ်ပြီး လူငယ်တွေကို ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ စီးပွားရှာမှုတွေ ကလည်း တရားခံ ပါပဲ။ လူငယ် ကျား၊ မတွေကို ပြည့်တန်ဆာဘဝ သွတ်သွင်းတာလည်း ကြားသိနေ ရတာပါ။ အစိုးရပိုင်းကနေ အဲဒီလို လူငယ်တွေ အတွက် ထိရောက်တဲ့ အကူအညီပေး ကယ်တင်မှုတွေနဲ့ ပညာသင်ယူစေမှုတွေ လုပ်ဆောင်ပေး တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ သက်သာရာ ရကြပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်တွေမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ စတင်တာက သဘာဝတခုလို ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေမှာ စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်လေ့ ရှိပြီး ဒါကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နိမ့်ကျသလို ခံစားရတာမျိုး ကနေ ဖြစ်တတ် တာပါ။ စိတ်ကျရောဂါက ကြေကွဲစရာ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင် မှုကို ဖြစ်စေတာမို့ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာမှာ လူငယ် ၉၀ဝ၀ဝ လောက်က သေကြောင်းကြံမှု လုပ်ကြတာ တွေ့ရ ပါသတဲ့။
တခြား စိတ်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ စိုးရိမ်လွန်မှု၊ အစားအသောက်မှု မမှန်ခြင်း ဆိုတာတွေ ကလည်း ဒီအရွယ်တွေမှာ တွေ့ရ တတ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာအများစု ကတော့ အမူအကျင့် ဆိုင်ရာ မူမမှန်တာတွေ ကြောင့် ဖြစ်ရတာတွေပါ။
ကလေးဘဝကနေ ဆယ်ကျော်သက်ကို ဝင်ရောက် လာချိန်မှာ သူတိုရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲ တွေကို အိမ်မှာရော၊ ကျောင်းမှာပါ ဂရုတစိုက် သွန်သင်ပေးနိုင်မှသာ လူငယ်ဘဝ ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်မှာပါ။ သူတို့ အရွယ်နဲ့ သင့်လျော်မယ့် အခြေအနေတွေကို ကျောင်းမှာ၊ အိမ်မှာ ကုစားတာမျိုးက အစ ဖန်တီးပေးနိုင်မှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ကျောင်းသားနဲ့ ဆရာ အကြား ဆက်ဆံရေး ကောင်း မွန်မှုက အဓိကကျတဲ့ နေရာမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
ခြုံငုံကြည့်လိုက်ရင် ဆယ်ကျော်သက် မြီးကောင် ပေါက်တွေမှာ သင့်တင့်လုံလောက်တဲ့ အာဟာရ ရရှိဖို့၊ ကျောင်း ပညာရေး ကလည်း အရည်အသွေး မြှင့်တင်ပေးတဲ့ စနစ်ကို ဦးတည်ဖို့က သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်မှာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအတွက် မိဘအုပ်ထိန်းသူရော၊ ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေရောက ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားလည် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့က အဓိကပါပဲ။
ဒါမှလည်း ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကို သက်သောင့်သက်သာ ဖြတ်သန်းပြီး ရင့်ကျက်တဲ့ လူကြီးဘဝကို ရောက် မှာပါ။ အစိုးရဘက် ကလည်း ဒီလို အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာအောင် စနစ်ကို ဖော်ဆောင်ပေးဖို့ အသိ တရားနဲ့ စေတနာရှိမှသာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ လူ့ဘဝအတွက် အကူးအပြောင်း ကာလ ဆယ်ကျော် သက်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ပြေလည်ပြီး တိုင်းပြည် အတွက် ဆိုတာလည်း ကျွဲကူးရေပါ အနာဂတ် လှမယ် မဟုတ်ပါလား။ ။
The post ဆယ်ကျော်သက် မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ အထွေထွေ appeared first on ဧရာဝတီ.
ရုပ်ပုံလွှာ ရိုက်ကူးခြင်း -(၅) ( Portrait Photograp...
မလိုလားအပ်သော ယူရစ်အက်ဆစ်များကို သဘာဝနည်းဖြင့် လျေ...
နှာခေါင်းထိပ်က အမည်းစက်တွေကို ရိုးရင်းလွယ်ကူစွာ ဖယ...
ဆယ်ကျော်သက် မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေး ...
နည်းပညာသုံး မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလာသည...
သတိ ပျင်းတတ် သူများလည်း အောင်မြင်ခွင့် ရှိသည် (ဘ၀ေ...
ဆေးခြောက် ကြာရှည်သုံးစွဲလျင် ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်ေ...
အားဖြည့် အချိုရည် သောက်သုံးခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်မျာ...
အလင်း၏ အလျင်ဖြင့် အချက်အလက် ပေးပို့သည့် ကွန်ပျူတာမ...
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ပြောသော သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
မိုးသီးဖြစ်ပေါ်ပုံကို လေ့လာတွေ့ ရှိရာမှ မုန်တိုင်းက...
ကလေးငယ်များ ရေနှစ်ခြင်းကြောင့် အများဆုံးသေဆုံးနေ
LinkedIn ကို ကျော်လွှားနိုင်မည့် Facebook at Work
ခေတ်သစ် ကျွန်စနစ်အောက် ရောက်ရှိနေသူ ၃၆ သန်းခန့် ရှ...
အစိုးရအဖွဲ့များ၏ စပိုင်ပရိုဂရမ်များကို ရှာဖွေနိုင်...
နည်းပညာမြင့် ကားများကြောင့် ယာဉ်မောင်းများ ကိုယ်စွ...
Password ကို ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တစ်ခု အဖြစ် အသံ...
Shutter, Aperture နဲ့ ISO ....
DSLR Camera ၀ယ်မယ်ဆိုရင်...
ကမ္ဘာကျော် လူကြီးတွေက တန်ဖိုးထားသော အရာ
အသ​က် ၅⁠၅ နှ​စ်နှ​င့် ၇​၄ နှ​စ်ြ​ကား အမျိုး​...
နေပူခံ လိမ်းဆေးတွင် ပါသော ဓာတု ပစ္စည်းကြောင့် အမျို...
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကြော်ငြာ ၀န်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူများကို လိ...
သွေးစွန်းသော မူဆလင်လူမျိုးတွေရဲ့ Ashura ခေါ် ကလေးငယ...
နည်းမှန်လမ်းမှန် နမ်းမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်...
တရုတ်ပြည်က sex toy စက်ရုံ
ဆိတ်သား vindaloo ဟင်းလျာ
နွားနို့ထက် ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ် ပိုများတဲ့ အစားအစာတွေကိ...
verification error အတွက် build prop ပြန်ရေးနည်းနှင...
ကော်ဖီအုန်းနို့ ကျောက်ကျောနဲ့ အချိုပွဲ လှလှပြင်ရအေ...
အသင့်၊ အလွယ်၊ အမြန်စားတွေရဲ့ အန္တရာယ်
ဓာတ်လိုက်ရာမှ ရုပ်ဆင်း ပျက်သွားသဖြင့် ရင်ဘတ်တွင် မ...
မျက်နှာ အသားအရေ နူးညံ့စေဖို့ အတွက် နို့ရည်က အကျိုး...
အိပ်ချိန်နှင့် အူလမ်းကြောင်း အနာရောဂါများ ဆက်စပ်နေ...
အသက်တစ်နှစ်အောက် ကလေးဘ၀တွင် မည်သည့် အရာကို လိုက်ကြ...
အံ့ဘွယ် မိန်းမသား . . (၃)
Computer model brand အလိုက် BIOS ထဲကို ဝင်လို့ရမဲ ...
Huawei G730-U00, Buildnumber 151 မြန်မာစာ ပါပြီးသာ...
အလန်းစား Recent Post Widgets5ခု...
Emoj များစွာ ပါဝင်​လာတဲ့ Bagan keyboard 5.0
မွေးကင်းစ ကလေးနှင့် လူကြီးတို့၏ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိ...
ထိုင်း စစ်ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျ၊ ၉ ဦး သေဆုံး
Panasonic HC-X1000 4K Ultra HD Camcorder Review
အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ပန်းချီပညာရှင် Joao A. Carvalho ...
အော်ရီဒူး ပြည်ပခေါ်ဆိုခ လျော့ချ
အမှောင်စွမ်းအင်နှင့် အနက်ထည် (၂)
အမှောင်စွမ်းအင် နှင့် အနက်ထည် (၁)
မောင်ငယ် တစ်ဦးရဲ့ မေတ္တာ
ကိုယ်ကျင့် ရနံ့သင်းတဲ့ ရုပ်အဆင်း
လယ်ဝေး မုန့်ဟင်းခါး အရည်ဖျော်နှင့် အသုပ်
ဝက်နံရိုး ချဉ်စပ်ဟင်းရည် (ထိုင်း)
အဖု၊ အကြိတ်၊ အသားသီးများအတွက် သဘာဝဆေးနည်းများ
ကလေးသူငယ် လိင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှုဖြင့် မြန်မာအမျိုးသား ထေ...
အမေရိကန် သမ္မတကတော် ရရှိသော လက်ဆောင်တန်ဖိုး
ကင်ဆာလူနာ စားသင့်တဲ့ အစားအစာ
လူတိုင်း သိထားရမည့် ဆီးအိမ်ကင်ဆာ အကြောင်း
ကျန်းမာရေးကို ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးများ
သတိထားရမည့် တရုတ်ဆေးဘဲဥ အတုများ
ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များကို မချက်ခင် သတိထားကြပါ
Cydia Icon ပျောက်သွား သူတွေအတွက် အလွယ်ကူဆုံး ပြန်လ...
Apple Logo မှာပဲ ရပ်နေတဲ့ iDevice တွေကို Advance S...
XperiFirmV3.1 by laguCool
THL Firmware – Myanmar Font Build in on Samsung Ga...
Root Samsung Galaxy Mega2SM-G750F by version 4.4...
Samsung Device တွေအတွက် မြန်မာစာကို Root မလို vers...
[FTF] Stock Firmware for Xperia Z3 D6602, D6603, D...
ShweKey Myanmar Keyboard for iPhone/Pad/Pod touch
Huawei Latest Firmware official Link
ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများသည့် ဗိုက်လှုပ်ကခြင်း
မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို သက်သာ စေဖို့အတွက်
ယောက်ျားလေးများ လှစေဖို့အလှအပ ထိန်းသိမ်းကြစို့ 
ပုဇွန်ဆိတ် ပဲပုပ် စပ်ဆီးစိမ်းအုပ်